အကိတျမမ – My Blog
ကိုမြိုးဝနှေငျ့စိုးစိုးသညျခဈြသူသကျတမျး ၃ နှဈနီးပါးရှိပွီဖွဈသောခဈြသူမြား ဖွဈကွလသေညျ။တက်ကသိုလျမှာကတညျးကခဈြကွိုကျခဲ့ကွပွီး ယခုတော့ကိုမြိုးဝသေညျအသငျ့အတငျ့အောငျမွငျသောလုပျငနျးရှငျတဈဦး ဖွဈလာပွီးစိုးစိုးကတော့ ပုဂ်ဂလိကကုမ်ပဏီတဈခုတှငျ စူပါဗိုကျဆာဖွဈ လာခဲ့လပွေီ။သူတို့နှဈဦးသညျ တပါတျတဈခါမှနျမှနျတှဖွေ့ဈကွပါသညျ။ကိုမြိုးဝကေအဆငျပွသေောလုပျငနျးပိုငျရှငျတဈဦးဖွဈသဖွငျ့ကိုယျပိုငျကား လေးတဈစီးဝယျထားနိုငျသောကွောငျ့စိုးစိုး၏ရုံးပိတျရကျတနင်ျဂနှတှေငျ ကားလေးဖွငျ့လာချေါပွီးတဈနရောသို့သှားစားသောကျကွသညျ။ပွီး လငျြဟျောတယျသှားခဈြတငျးနှီးနှောကွသညျ။တကယျတော့ခဈြသူဖွဈ ပွီး ၆ လအကွာတှငျစတငျ၍လိငျဆကျဆံဖွဈခဲ့ကွတာဖွဈပါသညျ။
နှဈဘကျမိဘမြားကလညျးသိထားပွီးဖွဈသညျမို့ပွဿနာလညျးမရှိခဲ့ပါ။ ကိုမြိုးဝတေဈယောကျဒီထကျပိုပွီးစုမိဆောငျးမိရှိလငျြလကျထပျကွမညျ ဆိုတာကသခြောနသေဖွငျ့ကနျ့သတျခြုပျခယျြခွငျးမရှိပါ။သူတို့နှဈဦးသညျ တခါတရံဟျောတယျတှငျ၎င်းငျး တခါတရံလူရှငျးလငျြကိုမြိုးဝေးအိမျတှငျ၎င်းငျး ခဈြတငျးနှောဖွဈကွလသေညျ။ စိုးဈုးသညျအပြိုစငျတဈဦးဖွဈပွီးကိုမြိုးဝနှေငျ့ပထမအကွိမျလိုငျဆကျဆံ တော့မှသာ ပါကငျအဖှငျ့ခံရခွငျးဖွဈပါသညျ။သူတို့နှဈဦးစတငျဆကျဆံ ဖွဈသှားသညျကကိုမြိုးဝကေားပျေါတှငျသာဖွဈလသေညျ။ခါတိုငျးလိုပငျ လူရှငျးသျောလညျးကားအသှားအလာမပွတျသောလမျးဘေးတဈနရော တှငျပှဖေ့ကျပှတျသပျနမျးရှုံ့ကွရာမှနှဈဦးစလုံးအရှိနျတကျကာလှနျ ကုးမိခွငျးဖွဈလသေညျ။ကားကလညျးမှနျအမဲနှငျ့မို့လှတျလပျတာ ကွောငျ့လညျးပါသညျ။ထိုစဉျကစိုးစိုးတဈယောကျကိုယျဝနျတားဆေးမြားဝယျသောကျခဲ့ရသျောလညျးရရှေညျစှဲသောကျရနျမသငျ့တျောသဖွငျ့ သားအိမျအတှငျကွေးကှငျးထညျ့၍ ကာကှယျထားရလသေညျ။ အခုတော့ နှဈနှဈကြျောသုံးနှဈကာလအတှငျးသူတို့နှဈယောကျပုံစံ မြိုးစုံဖွငျ့လိငျဆကျဆံဘူးကွလပွေီ။ အပွာကားမြား အပွာစာအုပျမြား ထဲမှတှဘေူ့းကွာဘူးဖတျဘူးသညျ့ပုံစံမြားအတိုငျးဆကျဆံခဲ့ကွသညျ။ နောကျထပျ ဆကျဆံဘို့ပုံစံအသဈမကနျြတော့သလောကျပငျဖွဈနေ လပွေီ။
နှဈယောကျစလုံးကလညျး လိငျဆကျဆံရာမှရရှိသောကာမအရ သာကိုတနထေ့ကျတနပေို့မိုစှဲလနျးနှဈခွိုကျလကျြရှိနကွေပပွေီ။တဖွေး ဖွေးနှငျ့ရငျထိတျသညျးဖိုခံစားကာ ကာမဆကျဆံရသညျကိုလညျးသ ဘောကလြာကွသညျ။ဥပမာ- မလှတျမလပျကားထဲတှငျ ကာမဆကျဆံ ကွရတာမြိုး လူအမြားခြောငျးကွညျ့နိုငျသောနရောတှငျကမနျးကတနျး ကာမဆကျဆံရတာမြိုး လူရှိသျောလညျးအနညျးငယျရှငျးလငျးသော နရောမြိုးတှငျမသိမသာတဈယောကျလိငျအင်ျဂါကိုတဈယောကျကိုငျတှယျ ပှတျသပျ၍အဆုံးအစှနျအထိရောကျသှားတမြိုးတို့ဖွဈလသေညျ။ ထိုသို့သညျးထိတျရငျဖို လှုပျရှားရသညျကိုနှဈယောကျစလုံးကနှဈခွိုကျသညျ။ရငျတခုနျခုနျဖွငျ့ဆကျဆံရသောအရသာကိုသဘောကလြာကွ သညျ။ တဈယောကျအင်ျဂါကိုတဈယောကျကစုပျယကျပေးလကျြပွီးဆုံးစေ တာမြိုးကတော့ရိုးတောငျသှားနပွေီဖွဈသညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ကွာလာတော့ကိုမြိုးဝကေအဆနျးထှငျပွနျသညျ။အဲဒါကတော့ စိုးစိုးကိုမလုံ့တလုံ ခပျဟော့ဟော့ဝတျစားဆငျယငျစလေကျြ လူကွား ထဲတှငျ သှားလာလှုပျရှားစခွေငျးဖွဈလသေညျ။သူကတော့တဈနရော ကစောငျ့ကွညျ့သညျ။စိုးစိုးကအရပျ ၅ ပေ နှဈလကျမ နို့အုံထှာထှား တငျကားကားဖွငျ့မိနျးမခြောလေးတဈယောကျဖွဈသညျ့အတိုငျးသူမခပျ ဟော့ဟော့ ဆကျစီကကြဝြတျစားသှားလငျြယောကျကြားကွီးကွီး ငယျငယျအရှယျမရှေးဝိုငျးကွညျ့ကွသညျ။
အာသာရမ်မကျမကျြလုံးမြား ဖွငျ့ကွညျ့ကွသညျ။တခြို့ကကွညျ့ရုံသာကွညျ့သျောလညျးတခြို့က အနားကပျ၍ထိကပါးယိကပါးလုပျခငျြသညျ။လိငျစကားခပျကွမျးကွမျး မြားပွောကွသညျ။စိုးစိုးကအစပိုငျးမကျြနှာလေးရဲသှားသျောလညျး နောကျပိုငျးကတြော့သညျလောကျမဟုတျလှတော့။စိတျထဲကတော့ရငျ ဖိုလှုပျရှားမိသညျ။ သှေးသားစီးဆငျးမှုမြားလညျးမွနျဆနျလာသညျ။ ဟိုဟာလေးထဲကလညျး ယားကြိကြိလိုလိုဘာလိုလိုဖွဈလာသညျ။ ထိုမှပွနျလာပွီးဟျောတယျခနျးထဲတှငျလိငျဆကျဆံကွသောအခါကိုမြိုးဝေ ကလိငျဆကျဆံရငျးခရစေတှေ့ငျးကမြေးသညျ။မေးရငျးလိုးသညျ။ ” သဲ ဟိုဆံပငျနီကွောငျကွောငျဆေးဆိုးထားတဲ့ကောငျလေးတှကေ စိုးအနားကပျလာပွီး ဘာတှပွေောတာလဲ။ဘာလုပျသှားသေးသလဲ။ ကို့နရောကအဲဒါတော့သခြောမမွငျရဘူး ” ” ဟငျ့ ကိုကလဲ ကိုက ခဈြကို အတိုအပွတျတှဝေတျခိုငျးထားတာကိုး။
ကောငျလေးတှကေစိုးနားကပျလာပွီး တငျပါးတှကေိုမထိတထိပှတျပေး တယျ။ပေါငျတှကေလညျးပျေါနတေော့ ပေါငျသားလေးတှကေိုလညျး ဟငျ့ ဟငျ့ ကပျပှတျသှားတာပေါ့” ” အဲဒီတော့ သဲစိတျထဲဘယျလိုနသေလဲ ဖီးမတကျဘူးလား” “ဟာ ကိုကလညျး ခဈြက ဖီးတကျစရာလားလို့ ဟငျ့ ကိုနျော” စိုးစိုးကကိုမြိုးဝေ၏လိုးဆောငျ့ခကျြနှငျ့အညီဖငျကလေးကိုကော့ပေးရငျး ပွနျဖွလေိုကျသညျ။ တကယျတော့ ကိုမြိုးဝကေသူမကိုမခဈြလို့ တနျဘိုးထားလို့မဟုတျမှနျးစိုး စိုးသိပါသညျ။ဤကိစ်စသညျ လိငျဆကျဆံရာတှငျနှဈဦးစလုံးပိုမိုကောငျး မှနျသောအရသာအသဈကိုခံစားရရှိစဘေို့ရညျရှယျမှနျးလညျးသိပါ သညျ။
သို့သျောမိနျးမသဘာဝအတိုငျးမူလညျးမူ အနညျးငယျလညျး ရှကျတကျတကျဖွဈနသေဖွငျ့ ဤသို့ပွောလိုကျခွငျးသာဖွဈလသေညျ။ ” သဲကလညျးကှာ အမှနျအတိုငျးကို့ကိုပွောပွပါ။ရှကျမနပေါနဲ့။ပွီး တော့ သူတို့ဘာတှပွေောသှားလဲ” ” အဟငျ့ ဟငျ့ ကိုနျော သူတို့ကအမကသိပျတောငျ့တာဘဲတဲ့ ဖငျကွီး တှကေိုကားနတောဘဲတဲ့ အမကိုကုနျးခိုငျးပွီးနောကျကနဆေောငျ့လိုး လိုကျရရငျလီးထဲမှာဆိမျ့သှား မှာဘဲတဲ့ ဟငျ့ ဟငျ့ အဲဒါကို့ကွောငျ့။သဲအဲဒီလိုအပွောခံရတာ သဲဝတျသှားရတာကလညျးကွညျ့ပါအုံး ဟငျ့ ဖငျတောငျပျေါတော့မယျ ဟငျ့ ” စိုးစိုးကပါးစပျကသာထိုသို့ပွောလိုကျသျောလညျးသူမစောကျပတျ အတှငျးကွောမြားက ကိုမြိုးဝလေီးကွီးကိုတငျးခနဲညှဈပေးလိုကျသညျ။ ခါတိုငျးထကျပို၍ညှဈအားပွငျးထနျသညျဟုထငျရလသေညျ။ တကယျတော့ကိုမြိုးဝကေလညျးစိုးစိုးသူ့အပျေါခဈြမှနျးသိပါသညျ။စိတျထဲ မှဖောကျပွားလိုစိတျမရှိမှနျးလညျးသိပါသညျ။သို့သျောသဘာဝအရ ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျနှငျ့နီးကပျစှာထိတှမေိ့လငျြ သာယာစိတျဖွဈပျေါ တတျသညျကိုနားလညျပါ၏။ ထို့ကွောငျ့လှတျလှတျလပျလပျလိုးကွ ညှောငျ့ကွပွီဆိုလငျြ ဤကိစ်စဘကျတှငျပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဆိုဆကျဆံ သာကပိုကောငျးသညျဟုသူကယူဆသညျ။ “အဲ့လိုအပွောခံရတော့ သဲဘယျလိုခံစားလိုကျရသလဲ” “အငျးပေါ့ အဲ့လိုအပွောခံလိုကျရတော့ သဲလရှေကျလညျးရှကျတယျ စိတျထဲကလညျးယားကြိကြိဖွဈလာတယျ ဟိုဟာကလညျးယားလာသလိုလိုဘဲ” သူမကထိုသို့ပွောလိုကျသဖွငျ့ အပျေါမှလိုးဆောငျ့နသေောကိုမြိုးဝေ၏လီး ကွီးမှာပိုမိုတငျးမာလာပွီး။
ဆောငိ့အားမှာလညျးပိုမိုပွငျးထနျလာနသေညျကိုစိုးစိုးသတိထားလိုကျမိလသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ “အငျးနျော သူတို့ကိုသိတာလညျးမဟုတျဖဲနဲ့ ပွီးတော့ခဈြတာလညျး မဟုတျဘဲနဲ့ သဲစိတျထဲမှာတမြိုးကွီးဖွဈလာတာ သိလား ကို” “အငျးပါ အဲဒါဆိုရငျ ဘယျသူမှလညျးမသိဘူး တစိမျးယောကျကြားတဈ ယောကျနဲ့လှတျလှတျလပျလပျတှရေ့လို့သူကတကျလိုးပေးရငျ သဲက ခံမှာလား” “ဒါကတော့ ကိုရယျ ပုံဆိုးပနျးဆိုးညဈတီးညဈပတျကွီးမဟုတျဘူး သူကလညျးသဲကိုကွငျကွငျနာနာဆကျဆံပေးတယျဆိုရငျ ပွီးတော့ ကိုကလညျးခှငျ့ပွုတယျဆိုရငျတော့ အဟိ” နားထောငျနသောကိုမြိုးဝေ၏လီးကွီးမှာစိုးစိုး၏စောကျခေါငျးအတှငျးထဲ တှငျတငျးခနဲဖွဈသှားပွီးခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့လိုးပေးလိုကျသလိုစိုးစိုး၏ စောကျပတျအတှငျးသားမြားကလညျးခါတိုငျးထကျပိုမိုသနျမာစှာလီး ကွီးကိုညှဈဖမျးစုပျယူလိုကျလသေညျ။စောကျရညျမြားကလညျးယခငျ ထိုပိုမိုမြားပွားစှာစိမျ့ကလြာလသေညျ။ ထိုနကေ့နှဈယောကျစလုံးခါတိုငျးထကျကာမစိတျပိုမိုပွငျးထနျစှာလိုးကွ ခံကွရငျး။ မတူထူးခွားသောလောကီစညျးစိမျကိုခံစားလကျြပွိုငျတူ အထှဋျအထိပျသို့ရောကျသှားကွလသေညျ။အားလပျရကျတဈရကျတှငျတော့ကိုမြိုးဝကေစိုးစိုးကိုခပျဟော့ဟော့ဆကျစီ ကကြဝြတျစားစလေကျြဘတျဈကားစီးကွလသေညျ။
ထိုကားပျေါတှငျ တဈယကျေတဈနရောခှဲနကွေရနျဖွဈသညျ။ လူကွပျသောကားကိုရှေး စီးကွပွီးကားပျေါတှငျ ရုပျပကျြဆငျးပကျြမဟုတျလငျြ အထိအတှေ့ အပှတိအသပျခံရနျနှငျ့နောကျမှထောကျတာကိုခံရနျ နှဈယောကျသ ဘောတူထားကွလသေညျ။ ဘတျဈကားပျေါရောကျတော့စိုးစိုးက ဂြောငျလေးတဈခုဆီသို့တိုးဝငျ သှားသညျ။စိုးစိုးဝတျလာသောဆကျစီကကြခြပျဟောဟော့ပုံစုံကွောငျ့ တိုးဝငျသှားသောအခါ ဟိုထိဒီထိလုပျခငျြသူမြားကိုတဒေါငျဆဈဖွငျ့ တှတျသှားရသညျ။မကျြနှာကိုလညျးခပျတညျတညျခပျတငျးတငျးလုပျ ထားသောကွောငျ့လူတျောတျောမြာမြားဘေးသို့ရှဲသှားကွသညျ ။ ထူးဆနျးတာတဈခုကတော့ လူငယျလူရှယျမြားကမကျြနှာထားကိုရှိနျ ပွီး ရှဲ သှားကွသျောလညျး။ ဦးလေးကွီးမြားကတော့ခပျတညျတညျပငျ စိုးစိုးနားသို့တိုးကပျကွသညျ။စိုးစိုးဂြောငျလေးထဲမှာကားပွတငျးပေါကျ ဘကျမကျြနှာမူရပျလိုကျတော့စိုးစိုးတငျပါးကွားထဲကိုနောကျဘကျမှအံဝငျဂှငျကလြာထောကျသူမှာဦးလေးကွီးတဈယောကျပငျဖွဈသညျ။
စိုးဈုးမသိမသာအကဲခတျလိုကျတော့ ထိုဦးလေးကွီးမှာအသကျ ၄၀ ကြျောကြျောခနျ့ဖွဈမညျ။စမတျကကြဂြိုကျကောငျးကောငျးဖွငျ့ဖွဈ သညျ။စိုးစိုးကိုလာမထောကျဘဲလမျးမှာသာတှမေိ့လငျြဒီလိုဏှာဘူးကွီး ဟုထငျရကျစရာမရှိ။ရညျရညျမှနျမှနျခပျသနျ့သနျ့ဖွဈသညျ။သို့သျောစိုး စိုး၏ခဈြသူကိုမြိုးဝပွေောသလို ဘယျသူမှမသိဘဲ အိပျရာပျေါမှာနှဈ ယောကျထဲတှလေ့ငျြလကျခံနိုငျသညျ့ပုံစံမြိုးဖွဈနသေညျ။ထို့ကွောငျ့ စိုးစိုးအသာငွိမျနလေိုကျသညျ။ နောကျကဦးလေးကွီးက ကားလှုပျတိုငျးအခှငျ့ကောငျးယူ၍ စိုးစိုး၏ ဖငျကွားထဲကိုဖိကပျညှောငျ့နသေညျ။သူထောကျထားတာကဖငျကွား ထဲတှငျကှကျတိဖွဈနသေဖွငျ့စိုးစိုးခမြာရငျတဖိုဖိုအသဲတယားယားဖွဈ နသေညျ။ ဘေးပတျဝနျးကငျြကိုမသိမသာအကဲခတျလိုကျမိတော့သူတို့ ကိုဂရုစိုကျမိသူမရှိ။ ဤသို့ဖွငျ့စိုးစိုးတို့ကားပျေါကဆငျးတော့ စိုးစိုးတဈယောကျ အတျော စိတျထနပွေီဖွဈသညျ။ကိုမြိုးဝကေားကိုထားခဲ့သောကွောငျ့တက်ကစီတစီး ကိုစိုးစိုးကိုယျတိုငျတားကာသှားနကေဟြျောတယျသို့မောငျးနှငျစသေညျ။ ကိုမြိုးဝကေလညျးစိုးစိုးရှနပွေီဖွဈကွောငျးရိပျမိသညျ။ပွုံးစိစိမကျြနှာပေးဖွငျ့ လိုကျလသညျ။ဟျောတယျအခနျးထဲသို့ရောကျတော့စိုးစိုးအဝတျအစား မြားကိုကမနျးကတနျးခြှတျခါကုတငျပျေါပကျလကျလှနျလိုကျသညျ။ကို တိုးကစိုးစိုးကို စခငျြ ညဈခငျြသဖွငျ့အေးအေးဆေးဆေးလုပျနသေညျ။ အဝတျအစားမြားကိုတဈထညျခငျြးခြှတျနသေညျ။ဒါကိုစိုးစိုးကလညျး သိသညျ။
မကျြစောငျးခဲ၍အံကွိတျပွကာကုတငျပျေါမှောကျရကျပွောငျး အိပျလိုကျသညျ။စိုးစိုး၏တငျပါးသားကလေးမြားမှာလုံးထဈပွီးမို့မောကျ နသေညျ။ကိုမြိုးဝကေစိုးစိုးဖငျသာလေးမြားကိုပှတျသပျဆုပျနယျဖွဈညှဈ လိုကျပွီး။ စိုးစိုး၏ဖငျအကှဲကွောငျးတလြှောကျသူ၏လီးထိပျကွီးဖွငျ့ထိုး သှငျးပှတျဆှဲပေးလိုကျသညျ။ “ခဈြကိုကားပျေါမှာတုနျးက ဟိုဦးလေးကွီးကဒီလိုဘဲထောကျပွီး ပှတျပေးနတောလား” ကိုမြိုးဝပွေောလိုကျမှစိုးစိုးတကိုယျလုံးတုံတကျသှားသညျ။ ” ဟငျ့ အငျးပေါ့ ကို ကခဈြကိုစကပျတိုတိုအသားပြော့ပြော့လေးဝတျခိုငျး သှားတော့ သူ့ဟာကွီးကခဈြဖငျကွားထဲတကယျညပျလာသလိုဘဲ အိ ဟငျ့ ဟငျ့” ကိုမြိုးဝကေလီးကိုနညျးနညျးလေးခေါငျးစိုကျလကျြဖငျကွားအောကျမှလြှို ၍စိုးစိုး၏စောကျဖုတျကလေးမမှီ့တမှီလှမျးတို့ပေးလိုကျသညျ။သူကထောကျပေးတော့ ခဈြကဖငျကလေးကော့မပေးလိုကျဘူးလား” ” ကိုနျော ရှကျစရာ တအားတိုးထောကျလာတော့ သဲလညျးဖငျကလေး ကိုမသိမသာကောကျပေးလိုကျတာပေါ့ လို့ ဟငျ့ အဟငျ့ ဒါပမေဲ့ တကယျတော့ထိမိရုံလေးပါ အဝတျတှကေလညျးခံနတေော့ ဘယျထိနိုငျပါ့မလဲ ဒါပမေဲ့ သိလားကို အဲ့လိုလေးကသဲစိတျကိုတအား ထလာစတောဘဲ ကိုရယျ ဟငျ့ ဟငျ့”။ စိုးစိုးကခေါငျးအုံးတလုံးကိုဆှဲပွီးမှောကျထားသောသူမဗိုကျအောကျ ဆှဲသှငျးလိုကျသညျ။ ထို့ကွောငျ့သူမ၏ဖငျတုံးကွီးမြားမှာခုံးတကျလာ ပွီး စောကျပတျလေးကအာတာတာလေးပျေါလာသညျ။စောကျရညျမြား ကတအားရှဲနဈနလေပွေီ။ကိုမြိုးဝကေသူ့လီးကွီးကိုစိုးစိုးစောကျပတျလေး ထဲသို့ခပျဖွေးဖွေးထိုးသှငျးလိုကျရငျး – “တကယျလို့ အခုခဈြစောကျဖုတျထဲလိုးသှငျးနတေဲ့လီးကွီးက ကား ပျေါကဟိုလူကွီးရဲ့လီးကွီးဆိုသဲဘယျလိုနမေလဲ ဟငျ” ” အာ ကိုကလဲ သိဘူးကှာ ခုသဲကိုခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့ပေးပါတော့” “အငျးပါ ဆောငျ့ပေးမှာပေါ့။
သဲကလညျးကို့စိတျကိုသိသားနဲ့ ဖွပေေးစမျးပါကှာ ရှကျမနပေါနဲ့ ဖီးယူခငျြလို့ဟာကို ” စိုးစိုးကသူမဖငျကွီးကိုလှုပျခါလိုကျရငျး “။ဆို ခဈြအမှနျအတိုငျးပွောမယျနျော။ကို သဲကိုအထငျမသေးရဘူး” “ဟာ သဲကလဲ ကို့စိတျကိုသဲသိသားနဲ့ သဲကိုအထငျလညျးမသေးဘူး အခဈြလညျးပေါ့ဘူး ပိုတောငျခဈြလာအုံးမှာ” စိုးစိုးကသူမဖငျကွီးကိုပွနျလှနျတိုးကပျပေးရငျး”။ အငျးပါ ဒါဆိုသဲပွောမယျ နညျးနညျးလောကျခပျပွငျးပွငျးလေး သဲ စောကျပတျကွီးကိုဆောငျ့လိုးလိုကျစမျးပါအုံး” ကိုမြိုးဝကေလညျး တျောတျောပွငျးပွငျးလေးဆောငျ့လိုးပေးလိုကျသညျ။ ” အား အငျ့ အီး ထိတယျကှာ အု အီး ဟငျ့အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ သဲလေ အငျ့ အဲဒီတုနျးကစိတျတအားပါလာတာ သိလား သဲဟာလေးထဲကယားတကျလာတာ ဘယျသူမှမသိလူးဆိုငျရငျ သဲကသူလိုးတာခံလိုကျခငျြတာလေ အား အီး သူကတခါမှမကွုံဘူး သေးတဲ့လူဆိုတော့ အမွဲအလိုးခံနတေဲ့ ကိုလိုးတာထကျပိုပွီးသဲ ရငျခုနျ မိလိမျ့မယျထငျတယျ သိလား ဟငျ့ ဟငျ့ အား ကို နာနာစောငျ့” စိုးစိုးကပွောရငျးကစောကျပတျကလေးရှုံ့သှားမိသလိုစောကျရညျမြား ကထပျမံ၍ယိုစီးထှကျလာသညျမှာခုထားသောခေါငျးအုံးပငျစိုသှားလေ ပွီ။စိုးစိုး၏ပွောစကားကွောငျ့ကိုမြိုးဝေ၏လီးကွီးမှာပိုမိုတငျးမာကွီးထှား လာပွီး။
လိုးဆောငျ့ခကျြမြားမှာလညျးမွနျဆနျသှကျလကျလာလသေညျ။ ကိုမြိုးဝကေအပျေါမှဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျ၍ဆောငျ့လိုးရငျး ” အား သဲရယျ ကောငျးလိုကျတာ ဟီး အခုသဲကိုလိုးဆောငျ့ပေးနတော အဲဒီလူကွီးဆိုရငျရော သဲဘယျလိုနမေလဲ ဟငျ” “အဟငျ့ တကယျသာသူဆိုရငျတော့ ဟငျ့ ဟငျ့ အား အမယျလေး ဦးရယျ သဲစောကျပတျကွီးကိုဦးလီးကွီးနဲ့လိုးပေးလိုကျစမျးပါ ရော့ပါဦးရယျ လိုးလိုကျစမျးပါ အားမနာတမျးလိုးလိုကျစမျးပါလို့ အျောမှာပေါ့ အငျ့….အ… အီး ဆောငျ့လိုကျစမျးပါကိုရယျ ဆောငျ့ပေးလိုကျစမျးပါ အာ့ အီး သဲပွီးပွီကို အား သဲပွီးသှားပွီ အဟငျး ဟငျး ဟငျး ” စိုးစိုးမှာသူ့အပွောနှငျ့သူဖီးအရမျးတကျသှားးပွီး ကိုမြိုးဝေ၏လီးကွီးကိုအခါ တိုငျးထကျပိုမိုစိတျထကျသနျစှာအားရပါးရညှဈဆှဲစုပျယူပွီးစောကျရညျ ဖွူဖွူပွဈပွဈမြားပနျးထုတျကာ လောကစညျးစိမျကိုအပွညျ့အဝခံစားရရှိ ရငျးပွီးဆုံးခွငျးသို့ရောကျရှိသှားလသေညျ။သူမစိတျထဲတှငျအခုလိုအပွငျ လူတဈယောကျကလိုးပေးနသေညျဟုစိတျကူးပွီးအလိုးခံလိုကျရသညျက။ ခါတိုငျးကိုမြိုးဝလေိုးပေးသညျကိုခံ၍ပွီးဆုံးသညျထကျပိုမိုအရသာပွညျ့ဝ သညျဟုထငျလိုကျမိလသေညျ။ထို့အတူကိုမြိုးဝကေလညျး စိုးစိုးစောကျခေါငျးထဲသို့ပူနှေးစေးပဈြသော လီးရညျမြားအပွညျ့ပနျးထညျ့ပေးလိုကျရငျးသူ့ကောငျမလေးစိုးစိုးကအခွားတဈယောကျနှငျ့အလိုးခံနရေငျးဖီးတကျနသေညျကိုစိတျကူးထဲတှငျမွငျယောငျပွီးလိုးလိုကျရသညျမှာခါတိုငျးထကျပိုမိုကောငျးမှနျစှာ အရသာရှိလှနျးလှသညျဟုခံစားမိလသေညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ စိုးစိုးနှငျ့ကိုမြိုးဝသေညျတပါတျလငျြတဈခါလောကျဘတျဈကား တိုးစီးကာ စိတျကူးထဲမှအပွငျလူတဈယောကျကလစိုးစိုးကိုလိုးပေး နတောကိုစိတျတူကိုယျတူအမေးအဖွလေုပျရငျးလိုးပှဲကွီးမြားဆငျနှဲခဲ့ ကွသညျမှာ လေးငါးကွိမျရှိခဲ့လပွေီ။ ဤတှငျကိုမြိုးဝကေတဆငျ့တကျခါ အပွငျလူတဈယောကျနှငျ့စိုးစိုးကို လကျတှတေ့ကယျတမျးပေးလိုးခငျြစိတျပျေါပေါကျလာပွနျသညျ။
ထိုအခြိနျတှငျ စိုးစိူးစိတျထဲတှငျလညျးကိုမြိုးဝမေဟုတျသောအခွားလူ တဈယောကျနှငျ့တကယျအလိုးခံကွညျ့လိုကျခငျြစိတျမြားတဖှားဖှား ပျေါပေါကျလာပွီဖွဈလသေညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ကိုမြိုးဝကေ သူ့ဆန်ဒကိုစိုစိုးအားပွောပွသောအခါ စိုးစိုးက အနညျးငယျငွငျးဆနျသလိုလုပျပွီး “ကို’ ခှငျ့ပွုတယျဆိုရငျပွီးတာပါဘဲဟု သဘောတူလိုကျလသေညျ။ဤသို့ဖွငျ့ ကိုမြိုးဝနှေငျ့စိုးစိုးတို့သညျ စိတျခယြုံကွညျရလောကျသောကနျြးမာသညျ့အပွငျလူတဈယောကျကို ရှာဖှကွေလတေော့၏။ကိုမြိုးဝေ၏ သဘောထားမှာ ပထမပိုငျးတှငျ ထိုလူစိမျးစိတျထဲတှငျကိုမြိုးဝမေသိဘဲ စိုးစိုးကအလိုတူသညျဟုထငျမွငျယူဆစရေမညျဟုဖွဈလသေညျ။ ဤနရောတှငျတော့စိုးစိုးနှငျ့အခွအေတငျငွငျးခုံရလသေညျ။စိုစိုးက ကိုမြိုးဝမေသိဘဲထိုလူနှငျ့အတူနသေညျဆိုလငျြထိုလူကစိုးစိုးကို ဖောကျပွနျသောမိနျးမတဈယောကျဟုအထငျသေးမညျကိုမခံလိုခွငျးဖွဈ လသေညျ။ ထို့ကွောငျ့အခြိနျတျောတျောကွာအငွငျးပှားကွပွီးကိုမြိုးဝနှေငျ့စိုစိုးခဈြသူ မြားဖွဈနမှေနျးမသိသောအခွားတဈယောကျဖွငျ့စိုးစိုးကရညျးစားထား ၍မွူဆှယျအလိုးခံရနျသဘောတူကွလသေညျ။ ထိုသို့အလိုးခံရာတှငျ အစ၌စိုးစိုးကအလိုးခံလိုကျပွီးကိုမြိုးဝကေိုအသေးစိပျပွနျပွောရနျနှငျ့ အဆငျပွပေါကစိုးစိုး၏ဖုနျးကိုဟိုလူမသိစဘေဲဖုနျးကိုစပီကာဖှငျ့လကျြ အလိုးခံရနျ။အကယျ၍ တတျနိုငျလငျြ ဟိုလူမသိစရေနျ ဖုနျးဖွငျ့ ဗှီဒီယိုကော ဖှငျ့လကျြကိုမြိုးဝကေို တိုကျရိုကျ ကွညျ့ရှုရနျတို့ကိုအစီအစဉျဆှဲ ကွလသေညျ။
ဤသို့ဖွငျ့နှဈယောကျစိတျတိုငျးကိလူရှာကွရာတျောတျောနှငျ့ရှာမတှေ့ ခြေ။ကိုမြိုးဝကေသဘောကသြူကိုစိုးစိုကမကွိုကျ။တဖနျစိုးစိုးကနှဈခွိုကျ သူကိုကိုမြိုးဝကေသဘောမကဖြွငျ့ အတျောကွာအလုပျမဖွဈကွပေ။ တှမေဲ့တှတေ့ော့စိုးစိုးတို့ရုံးတှငျအတူအလုပျလုပျနသေောစိုးစိုးထကျ ရာထူးတဆငျ့နိမျ့ပွီးအသကျလညျးငယျသောကောငျလေးတဈယောကျ ကိုသှားတှလေ့သေညျ။ထိုကောငျလေးမှာကုမ်ပဏီတှငျစိုစိုးအလုပျဝငျ ပွီးနောကျမှအလုပျဝငျလာသူဖွဈပွီး စိုးစိုးတှငျရညျးစားရှိမှနျးမသိဘဲ စိုးစိုးကိုလိုကျဘူးသူဖွဈလသေညျ။စိုးစိုးကသူမတှငျခဈြသူကိုမြိုးဝရှေိနေ ကွောငျးငွငျးပယျလိုကျသဖွငျ့နောကျဆုတျသှားခွငျးဖွဈသညျ။ သို့ သျောထိုကောငျလေးမှာစိုးစိုးကိုအဈမတယောကျလိုဆကျဆံလကျြရုံး တှငျစိုးစိုး၏အလုပျမြားတှငျကူညီလုပျကိုငျပေးနလေသေညျ။ထမငျးစား ခြိနျမြားတှငျလညျးထမငျးခြိုငျ့ခွငျးဆုံလကျြ အတူထမငျးစားကွသလို အလုပျပါးခြိနျမြားတှငျစိုးစိုးကသူ့ကိုချေါလကျြ နှဈယောကျအတူတူ မုနျ့ထှကျစားတတျလသေညျ။ စိုးစိုးကသူမကိုထိုကောငျလေးစလိုကျခါစက ကို သာမရှိရငျဟု စိုးသူ့ ကိုလကျခံလိုကျမှာဟု ကိုမြိုးဝကေိုပွောပွဘူးလသေညျ။
စိုးစိုးကထို ကောငျလေးနဲ့ဆိုရငျဘယျနဲ့နသေလဲဟုကိုမြိုးဝကေိုပွောပွသောအခါ ကိုမြိုးဝကေလညျးသခြောလလေ့ာစုံစမျးပွီးသဘောတူလိုကျခွငျးဖွဈပါ သညျ။ ထိုကောငျလေးအမညျမှာ တငျဝငျးဟုချေါပွီးစိတျထားဖွူစငျ ဖွောငျ့မတျပွီးရိုးသားပှငျ့လငျးသူဖွဈသညျဟုစိုးစိုးကကိုမြိုးဝကေိုပွောပွလသေညျ။
ထို့ကွောငျ့ရုံးတှငျစိုးစိုးက ကိုမြိုးဝနှေငျ့ပွတျသှားပွီဖွဈကွောငျး ကညြော၍ တငျဝငျး၏အခဈြကိုလကျခံလိုကျရနျဖွဈလသေညျ။ ကိုမြိုးဝကေလညျး စိုးစိုး၏ကုမ်ပဏီသို့အရငျကထဲကအရောကျအပေါကျနဲသူဖွဈသဖွငျ့ ပွဿနာသိပျမရှိလှပါ။ ဤသို့ဖွငျ့ စိုးစိုးကတငျဝငျး ခဈြရေးဆိုတာကိုလကျခံလိုကျအပွီး ပထမဆုံးအကွိမျခြိနျးတှသေ့ောနသေို့ရောကျလာလသေညျ။ထိုသို့စိုးစိုးနှငျ့တငျဝငျးတို့ခြိနျးဆိုထားသောရကျမတိုငျမီ စိုးစိုးတို့ခဈြသူ နှဈယောကျဟျောတယျခနျးငှားကွသညျ။ခဈြသူနှဈယောကျဟုဆိုသျော လညျး အခနျးငှားရာတှငျစိုးစိုးမပါပါ။ကိုမြိုးဝတေဈယောကျထဲဟျောတယျ တှငျနှဈယောကျခနျးယူလိုကျသညျ။ထိုအခနျးတှငျသူတဈယောကျထဲည အိပျပွီး အခနျးမကျြနှာကကျြမီးလုံးဘေးတှငျ။ဖုနျးမှအငျတာနကျဖွငျ့ တိုကျရိုကျကွညျ့ရှုနိုငျသော ကငျမရာအသေးလေးတလုံးကိုနှဈဖကျတိတျဖွငျ့ကပျ၍တပျထားလိုကျသညျ။ မသိသာကွောငျးသခြောအောငျလုပျသညျ။ထိုညကကိုမြိုးဝေ ထိုဟျောတယျတှငျတဈညအိပျလိုကျသညျ။မနကျကမြှစိုးစိုးရောကျလာသညျ။ စိုးစိုးရောကျလာတာကို ကိုမြိုးဝကေဟျောတယျဧညျ့ခနျးမှပငျကွိုဆိုပွီး ဟျောတယျဧညျ့ကွိုဌာနကိုသူစိုးစိုးနှငျ့မိတျဆကျပေးပွီး သူ့ညီမ လငျမ ယား အခနျးဆကျယူမညျဖွဈကွောငျးပွောကာအခနျးသော့ကိုလှဲပွောငျး ပေးခဲ့သညျ။ဟျောတယျငှားရမျးခကိုလညျးနှဈရကျစာရှငျးပေးခဲ့သညျ။ ကိုမြိုးဝထှေကျသှားတော့စိုစိုးလညျးငှားရမျးထားသောအခနျးတှငျးသို့ ဝငျလိုကျသညျ။ကိုမြိုးဝကေပျထားသော ကငျမရာပေါကျစလေး ကိုကွညျ့ပွီး မသိသာနိုငျဟုတှေးကာကနြေပျသှားသညျ။ထို့နောကျ တငျဝငျးထံဖုနျးဆကျသညျ။
” ဟယျလို မောငျလား မပါ။မောငျလာရငျ စမျးခြောငျး ဓမ်မစတေီလမျး က ဟျောတယျကိုလာခဲ့နျောမောငျ အငျး ထမငျးစားပွီးနလေ့ညျတဈတနာရီလောကျလာခဲ့ပေါ့။ အငျး အဲဒီဟျောတယျက မ ကိုမြိုးဝနေဲ့တုနျးကတဈခေါကျနှဈခေါကျ ရောကျဘူးထားတာပါ။မအရငျရောကျပွီးအခနျးယူထားလိုကျမယျ အငျးပါမောငျရယျ သူ့နဲ့ဖွဈခဲ့တာတှမေပေ့ဈလိုကျပါပွီ။ မောငျ့ကိုပဲခဈြတာပါ” ထို့နောကျစိုးစိုးသညျအခြိနျရသေးသဖွငျ့ ကိုမြိုးဝထေံဖုနျးဆကျပွီးကငျမရာ ကိုစမျးသညျ။တကိုယျလုံးတုံးလုံးခြှတျပွသညျ။အိပျ၍ကားပွ ကုနျးပွ လမျးလြှောကျပွသညျ။ကနြေပျပွီးဆိုမှအဝတျအစားမြားပွနျဝတျထား လိုကျသညျ။ကငျမရာစမျးရငျးနှငျ့ပငျစိုးစိုးဟာလေးအတျောစိုသှား သညျ။အခြိနျလိုသေးသဖွငျ့နလေ့ယျစာကိုအပွငျထှကျစားက အခြိနျနီး မှပွနျစောငျ့နလေိုကျသညျ။ တငျဝငျး ရောကျလာတော့အခနျးနံပါတျကွိုပွောထားသဖွငျ့ဟျောတယျ ဧညျ့ကွိုက အခနျးထိလိုကျပို့သညျ။အခနျးထဲရောကျတော့တံခါးပိတျ ပွီးတာနဲ့ထှနျးလှငျက စိုးစိုးကိုအတငျးဖကျနမျးသညျ။ဆာလောငျမှတျ သိပျပွငျးပွသောလူပြိုလေး၏အနမျးကွောငျ့ စိုးစိုးမှာစောကျဖုတျတဈခု လုံးစောကျရညျမြားရှဲနဈသှားသညျ။
” ဟငျ့ ဖယျပါအုံးမောငျရယျ မ ဘယျမှထှကျမပွေးပါဘူး မ အဝတျအ စားတှခြှေတျပါရစအေုံး မောငျလညျးခြှတျလေ” တဈယောကျကိုတဈယောကျအပွနျအလှနျခြှတျပေးရငျး မကွာမီ နှဈ ယောကျလုံးကိုယျလုံးတီးဖွဈသှားသညျ။စိုစိုးကမသိမသာအကဲခတျ ကွညျ့လိုကျတော့ တငျဝငျး၏လီးမှာအစှမျးကုနျတောငျနသေညျကို တှရေ့သညျ။တငျဝငျး၏လီးမှာကိုမြိုးဝေ၏လီးထကျယောငျယောငျလေး ငယျသညျဟုထငျရသျောလညျးကနြေပျဘှယျလူစဉျမိသောအရှယျအစား ထွဈပါသညျ။တငျးမာတောငျမတျနတောကတော့ ကိုမြိုးဝထေကျသာ သညျ။မတျတပျရပျနသေောကိုမြိုးဝေ၏လီးမှာရှသေို့ငေါထှကျနရေုံသာ မက အပျေါသို့ပငျကော့တကျလကျြတဆတျတတျခုနျနသေညျ။ စိုးစိုးကသူမ၏နုညံ့သောလကျကလေးဖွငျ့အသာအယာဖမျးယူဆုပျကိုငျ ကွညျ့လိုကျတော့ ပူနှေးသောကိုမြိုးဝေ၏လီးခြောငျးကွီးမှာလကျထဲတှငျ တုနျနသေညျမှာအားရစရာကွီးဖွဈသညျ။လီးတနျကွီးပျေါမှဖောငျးကွှ နသေောသှေးကွောမြားကသှေးတိုးနတောကို လကျမှတဆငျ့ခံစားမိ ရငျးစိုးစိုးတကိုယျလုံးကာမသှေးမြားဆူပှကျစီးဆငျးလာသညျ။ပှငျ့ပှငျ့ လငျးလငျးပွောရရငျတော့စိုးစိုးတဈယောကျအလိုးခံခငျြစိတျမြား တဖှားဖှားပျေါလာတာဖွဈသညျ။ ပွီးတော့ယခုတခါကမတှဘေူ့း မကွုံ ရဘူးသေးသောသူနှငျ့ကာမဆကျဆံရမညျဖွဈသဖွငျ့ အသဈအဆနျး ကိုခံစားထိတှလေို့စိတျမြားကလညျး။
ရမ်မကျဆန်ဒကိုပိုမိုနှိုးဆှထကွှစေ လသေညျ။ထို့အပွငျ တငျဝငျး၏ပွောစကားကွောငျ့တငျဝငျးမှာမိနျးမ မလိုးဘူးသေးသောလူပြိုစဈစဈကလေးဖွဈသညျဆိုသောကွောငျ့လညျး စိုးစိုး၏ရမ်မကျဆန်ဒမြားပေါကျကှဲမတတျတဟုနျးဟုနျးတောကျလောငျ ကာစောကျရညျမြားအလှနျအမငျးယိုစီးကလြာသညျမှာပေါငျမြားဆီအထိ ဖွဈနလေပွေီ။ခကျြခွငျးပငျ စောကျပတျကိုဖွဲပေး၍ တငျဝငျး၏အလိုးကို အားရပါးရခံလိုလှပပွေီ။ သို့သျောကိုမြိုးဝပွေောလိုကျသော ” ခဈြကောငျလေးကသူပွောတဲံအတိုငျး ဆိုရငျ လူပြိုအစဈကလေးဆိုတော့ခဈြစောကျပတျနဲ့တှတေ့ာနဲ့တခါထဲ တနျးထှကျသှားလိမျ့မယျ ဒါမှမဟုတျသူ့လီးကိုခဈြစောကျခေါငျးထဲ ထညျ့လိုကျတာနဲ့ လီးရညျတှတေခါထဲပနျး လိမျ့မယျ။ဒါဆိုရငျခဈြ ကဆနျ့တငငျဖွဈသှားမှာပေါ့ ဒါကွောငျ့သူ့ကိုတခါလောကျအရငျပေးပွီး လိုကျ ဒါမှမဟုတျပွီးအောငျစုပျပေးလိုကျပေါ့။ ခဈြသဘောနျော ကိုဘာမှမပွောဘူး “ဆိုသောစကားကွောငျ့တငျဝငျးကိုဂှငျးထုပေးရနျစိတျကူး လိုကျသညျ။ လီးကိုတော့ အခုတော့စုပျမပေးသေးဘူး။နောကျတဈခါ ကမြှစုပျပေးတော့မညျဟုလညျးတှေးလိုကျသညျ။ဤသို့ဖွငျ့ အစပိုငျးတှငျတငျဝငျးကိုဂှငျးထုပွီးအရငျပွီးခိုငျးပွီး နောကျတခြီကမြှအလိုးခံရနျ လီးကိုအထကျအောကျဂှငျးထုပေးလိုကျသညျ။ထိုအခါကမြှတငျဝငျး၏လီးသညျဒဈပငျမပွုတျသေးဘဲလီးအရညျပွားလေးက ပှငျ့သညျဆိုရုံမလြနျနသေညျကိုတှရေ့လသေညျ။ကိုမြိုးဝေ၏ဒဈပွဲကွီးဖွငျ့ သာအလိုးခံဘူးသောစိုးစိုးမှာအသဈအဆနျးဖွဈခါရငျတဒိတျဒိတျခုနျလကျြအသဲလညျးယား စောကျပတျလညျးယားကာလီးထိပျအရညျပွား လေးကိုအသာဆှဲဖွဲလိုကျလသေညျ။
“အား မ ” “ဟငျ မောငျနာလို့လား” စိုးစိုကဂရုဏာသံလေးဖွငျ့မေးလိုကျရငျး အသဲ တယားယားဖွငျ့လီးလေးကိုငုံစုပျပေးလိုကျလတေော့သညျ။”မောငျနာလို့လား” စိုးစိုးကဂရုဏာသံလေးဖွငျ့မေးရငျးအသဲတယားယားဖွငျ့လီးလေးကိုငုံစုပျပေးလိုကျလသေညျ။ “အ….အား” တငျဝငျးမှာသူ၏လီးကိုစိုးစိုးကငုံစုပျပေးလိုကျသောကွောငျ့တကိုယျလုံး တုနျတကျသှားသညျ။သူ့တသကျတှငျဂှငျးထုဘူးသျောလညျးစိုးစိုးလို မိနျးမလှတဈယောကျကလီးစုပျပေးလိမျ့မညျဟုမမြှျောလငျ့ခဲ့ဘူးပေ။ ပွီးတော့အခုလီးစုပျပေးနသေူမှာလညျးလှနျခဲ့သော ၂ နှဈကြျောကုမ်ပဏီ သို့အလုပျဝငျစကတညျးက။မှနျး၍ဂှငျးထုခဲ့ရသောအဈမအကိတျလေး ဖွဈနပွေနျသဖွငျ့လီးရညျမြားပငျပနျးထှကျခငျြသလိုလိုဖွဈလာသဖွငျ့ မနညျးခြုပျတညျးထားရလသေညျ။ စိုးစိုးကသူမပါးစပျဖွငျ့ငုံထားသောလူပြိုနုနုထှဋျထှဋျကလေး၏လီးထိပျကို စိတျပါလကျပါစတေနာအပွညျ့အဝဖွငျးလြှာလေးဖွငျ့ထိုးစှပေးနလေေ သညျ။တဖနျပါးစပျထဲတှငျတံတှေးမြားဖွငျ့စိုရှဲနသေောလီးကိုပွနျထုတျ၍ လီးထိပျအရပွေားကလေးကိုအသာဆှဲဖွဲလိုကျပွနျသညျ။လီးအရခှေံ လေးမှာတံတှေးမြားဖွငျ့နူးနသေဖွငျ့အနညျငယျပွဲဟသှားလသေညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ စိုးစိုးသညျလီးလေးကိုငုံစုပျလိုကျ လြှာလေးဖွငျ့ယကျပေးလိုကျ။ လီးရခှေံလေးကိုဆှဲဖွဲလိုကျ လုပျပေးနသေဖွငျ့ လီးထိပျကလေး မှတဖွေးဖွေးပှငျ့အာလာပွီးလီးဒဈကလေးပငျပျေါလုလုဖွဈလာနလေေ ပွီ။ ထို့အတူတငျဝငျးမှာလညျးမကွုံစဘူးထူးကဲစှာ လီးအစုပျခံနရေသ ဖွငျ့ အရသာကောငျးမှနျလှသဖွငျ့ လိငျတံခြောငျးတလြှောကျတစဈစဈ ဖွဈကာလီးရညျမြားပနျးထုတျလုဆဲဆဲဖွဈလာတော့သညျ။
” အာ့ အငျ့ မ မရတော့ဘူး မောငျပွီးခငျြလာပွီ မောငျ့လီးကိုမမ ပါးစပျ ထဲကထုတျပေးပါ။ား… အီး ထုတျလိုကျလေ မရဲ့ … အီး သှားပွီ မရတော့ဘူး ထှကျကုနျပွီ အား….အူး…. အိ” စိုစိုးသညျတငျဝငျးပွောစကားကိုနားမထောငျဘဲတငျဝငျး၏တငျပါးမြား ကိုလကျဖွငျ့ဆှဲကာ ဖိကပျထားပွီးပါးစပျအတှငျးမှတငျဝငျးလီးကိုစုပျ အားသနျသနျဖွငျ့စုပျပေးလိုကျရာတငျဝငျး၏လီးရညျမြားသူမပါးစပျပတှငျးသို့အရှိနျပွငျးစှာဒလဟောဝငျလာတော့သညျ။စိုးစိုးလညျးပါးစပျအတှငျးမှပွညျ့လြှံလကျြမေးစမှေ့ပငျစီးကလြာသောလီးရညျမြားကိုတဂှတျ ဂှတျမြိုခရြငျးပွီးဆုံးသှားသဖွငျ့ကာမအရသာကိုခံစားနသေော။ တငျဝငျး မကျြနှာကိုမကျြလှာပငျ့မော့ကွညျ့ရငျး ပီတိဖွဈနလေတေော့သညျ။ ထို့နောကျ ထိုငျရာမှထကာ မေးစတှေ့ငျစီးကနြသေောတငျဝငျး၏ လီးရညျမြားကိုလကျခုံဖွငျ့သုတျရငျးထရပျလိုကျသညျ။ ” မောငျ ကောငျးလား မလုပျပေးတာကောငျးရဲ့လား အဲဒါမောငျ့ကို ခဈြလှနျးလို့လုပျပေးတာ သိရဲ့လား ” ဟုခဈြမကျြစောငျးလေးခဲလကျြ ကွာမူပါပါမေးလိုကျလသေညျ။ “အား ခဈြလိုကျတာ မ ရယျ။မောငျ့ဒါမြိုးတဈခါမှမခံစားဘူးဘူး မ ကိုတအားပိုခဈြမိသှားပွီ။”ဟုပွနျပွောရငျးကိုယျလုံးတီးဖွငျ့ကော့ ကော့ကလေးရပျနသေောစိုးစိုးကို။
ရငျခှငျထဲဆှဲသှငျးပွီးမကျြနှာအနှံ့ တရှုံ့ရှုံ့နမျးရှုပျနလေသေညျ။တငျဝငျး၏ရငျခှငျအတှငျးခါးလေးကော့ လကျြဆီးခုံခွငျးထိကပျခါပွနျလညျဖကျထားသောစိုးစိုးမှာ တဈစုံတဈ ခုကိုစဉျးစားမိသဖွငျ့ ရငျထဲတှငျထိတျခနဲဖွဈသှားလသေညျ။အကွောငျး မှာကိုမြိုးဝနှေငျ့နစေဉျကကိုမြိုးဝလေီးကိုကွိမျဖနျမြားစှာစုပျပေးဘူးသျော လညျးကိုမြိုးဝေ၏လီးရညျမြားကိုတဈခါမှသူမပါးစပျအတှငျးအပနျးမခံခဲ့ သောကွောငျ့ဖွဈလသေညျ။ အကယျ၍ပနျးထဲ့ခဲ့မိလငျြလညျးကိုမြိုးဝေ၏ လီးရညျမြားကိုမြိုခခြွငျးမပွုဘဲအပွငျသို့သာထှေးထုတျမွဲဖွဈလသေညျ။ အခုတော့ တငျဝငျး၏လီးရညျမြားကိုသူမကမြိုခပြဈသညျကိုလြှို့ဝှကျ ကငျမရာမှတဆငျ့မွငျသှားလပွေီ။ ဟယျ တတျနိုငျပါဘူး။ ကိုမြိုးဝနှေငျ့တှေ့ မှခြော့မော့ပွောဆိုကာကိုမြိုးဝလေီးကိုစုပျပေးပွီလီးရညျမြားကိုမြိုခပြေး လိုကျမညျဟုစဉျးစားစိတျဖွလေိုကျလသေညျ။့ယခုလောလောဆယျတော့တငျဝငျးနှငျ့ကာမဂုဏျခံစားကာပြျောပြျောပါနလေိုကျတော့မညျဟုစဉျးစားကာ ” မောငျ လာကုတငျပျေါမှာခဏ နားလိုကျပါအုံး အမောပွတေော့မှ မ ကိုလိုးပေးဦး လာ လာ” ဟုဆိုပွီးကုတငျပျေါသိုဖငျတုံးလုံဖွငျ့ကုနျး၍အရငျတကျသှားလသေညျ။တငျဝငျးမှာလညျးကိုမြိုးဝနှေငျ့သုံးနှဈသုံးမိုးအလိုးခံလာသညျ့တိုငျပြော့အိ တှဲကခြွငျးမရှိဘဲတငျးရငျးဖုထဈနသေောစိုးစိုး၏ဖငျကွီးမြားကိုကွညျ့ ကာလီးပငျပွနျတောငျခငျြသလိုလိုဖွဈလာလသေညျ။ နှဈယောကျစလုံးကုတငျပျေါရောကျသောအခါစိုးစိုးက “မောငျ ရော့ အမောပွေ မရဲ့နို့လေးတှစေို့လိုကျစမျးပါအုံး” ဟုဆိုကာတငျးရငျးကော့ထောငျနဆေဲဖွဈသညျ့သူမ၏နို့ကွီးကိုလကျဖွငျ့ ပငျ့၍တငျဝငျး၏ပါးစပျတှငျတပေ့ေးလိုကျလသေညျ။တငျဝငျးက သူမ၏နို့ကွီးနှဈလုံးကိုအားသနျသနျဖွငျ့တလှညျ့စီတပွှတျပွှတျစို့ပေးနေ စဉျစိုးစိုးကလညျးတငျဝငျး၏မပြော့မမာဖွဈနသေောလီးခြောငျးကွီးကို လကျဖွငျ့ပှတျသပျနှိုးဆှပေးနလေသေညျ။
လူပြိုလေးဖွဈသောတငျဝငျး မှာလညျးပထမတခြီပွီးစီးထားသျောလညျးလီးမှာမကွာခငျပွနျလညျ ထောငျမတျလာလသေညျ။တငျဝငျး၏လီးကွီးစိတျတိုငျးကထြောငျမတျ လာသညျ့အခါ စိုးစိုးက “မောငျ မတို့လိုးကွရအောငျ အခုတော့ မ ကမောငျ့ကိုလိုးပေးမှာ မောငျ့ပကျလကျလှနျလိုကျ” ထို့နောကျစိုးစိုးသညျတငျဝငျးအပျေါတကျခှကာမာတောငျနသေောလီး ကွီးကိုလကျဖွငျ့ကိုငျ၍။သူမ၏စောကျခေါငျးဝတှငျတကေ့ာဖွေးဖွေးခငျြး ထိုငျခလြိုကျလသေညျ။ “အားမောငျ့လီးကွီးကမာနလေိုကျတာအရမျးဘဲ အု အဈ ဟငျ့ ကောငျးလိုကျတာမောငျရယျ အု” ” မောငျလညျးတအားကောငျးတာပါဘဲ မရယျ အခုတော့ မောငျစိတျကူး ယဉျထားတဲ့အတိုငျးဖွဈနပွေီ မရဲ့” ” ဟငျ့ မောငျကဘယျလိုမြားစိတျကူးယဉျထားခဲ့တာလေ အာ့ အိ” စိုးစိုသညျတငျဝငျး၏ရငျဘတျပျေါလကျထောကျလကျြဖငျကလေး ကွှခါကွှခါတစှပျစှပျဖွငျ့ မှနျမှနျလေးလိုးပေးနရေငျးကအမူပါပါလေး မေးလိုကျသညျ။ “အျော ဒီလိုပါ မမကိုမောငျစတှတေဲ့ နကေ့စပွီးမောငျ့ဂှငျးထုတိုငျး မမကိုမှနျးခဲ့တာ ဒီလိုပုံစံလညျးပါတယျ မရဲ့ ” ဟငျ့ လူဆိုလေး သူမြားကို ကဲပါမောငျရယျ မောငျကလညျးအောကျ ကပွနျကော့လိုးပေးလေ မတဈယောကျထဲလိုးပေးနရေတာမောတယျ မောငျရဲ့” ထိုအခါတငျဝငျးကလညျးငယျရှယျသူပီပီခါးအားသနိသနျဖွငျ့ကော့ ပွီးတဇတျဇတျလိုးပေးလိုကျလသေညျ။
ထိုအခါကမြှစိုးစိုးလညျးဒူး ထောကျလကျြတငျဝငျးရငျဘတျကိုလကျဖွငျ့ထောကျထားရငျး။ ပေါငျ လေးကိုကှထားရငျးတငျဝငျး၏ကော့၍ကော့၍လိုးဆောငျ့ခကျြမြားကို မကျြစိလေးမှေးကာအရသာခံနလေသေညျ။အားထိတယျမောငျ လိုး…လိုး အငျ့ အု အီး မောငျ မနို့တှကေိုဆှဲပေးလေ အား မ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုပှတျ ပေး ခပြေေးလေ အာ့ ဟုတျတယျ မောငျကောငျးလိုကျတာ မိနျးမဆို တာအလိုးခံရငျး နို့သီးလေးတှခေပြေေးရငျအရမျးအရသာရှိတာဘဲ။ သိလား လိုးမောငျရေ မစောကျပတျကွီးကိုအားမနာတမျးစိတျရှိလကျ ရှိသာလိုးပေးပါ မောငျရယျ အငျ့ အဟဈ ဟဈ အု” စိုးစိုးကလညျးမောငျမောငျအကော့နှငျ့အံဝငျဂှငျကဆြောငျ့ဆောငျ့ခရြငျး နှဈဦးစလုံးထူးကဲသောကာမအရသာကိုအပွညျ့အဝခံစားနကွေလေ သညျ။စိုးစိုးမှာမိနျးမမြားတအားတဏှာစိတျထကွှလာလငျြဖွဈတတျ သောသဘာဝအတိုငျးသားအိမျခေါငျးမှအောကျသို့ငိုကျဆငျးလာပွီ ဖွဈသဖွငျ့သူမဆောငျ့ခလြိုကျတိုငျးမောငျမောငျ့လီးထိပျဖွငျ့ဆောငျ့မိ သဖွငျ့ ထူးခွားလှသောကာမအရသာကိုအောငျ့တောငျ့တောငျ့ဖွငျ့ မကျြလုံးမြားပွာဝခေမနျးခံစားရရှိနလေသေညျ။ အား ကောငျးလိုကျတာကှာ မောငျ့လီးကွီးက မရဲ့သားအိမျခေါငျးကို ဆောငျ့မိနပွေီ သိရဲ့လား အား လိုးကှာလိုး လိုး အငျ့ အား အီး” စိုးစိုးမှာစောကျခေါငျးအတှငျလှိုငျးတှနျ့နံရံမြားတဖွတျဖွတျလှုပျရှားကာ။
တငျဝငျးလီးကွီးကိုဆှဲညှဈစုပျယူပေးရငျးစောကျရညျမြားတဗွဈဗွဈ ထှကျခါ ပွီးဆုံးခွငျးအထှဋျအထိပျသို့ တကိုယျလုံးတဆတျဆတျတုနျခါ ကာရောကျရှိသှားလသေညျ။ သူမစိတျထဲတှငျကိုမြိုးဝလေိုးပေးစဉျကထကျ ပိုမိုပွညျ့ဝသောကာမစညျးစိမျကိုခံစားရရှိမိသညျဟုကိုမြိုးဝနှေငျ့တှသေ့ော အခါပွောပွရှာလသေညျ။ တငျဝငျးမှာလညျးစိုးစိုးစောကျခေါငျးအတှငျးသားနံရံမြား၏သနျမာ သောဆှဲစုပျယူပေးမှုကွောငျ့ လီးတလြှောကျလုံးကငျြတကျလာပွီး သူ၏ပူနှေးပွဈခြှဲသောသုတျရညျမြားကိုစိုးစိုး၏စောကျခေါငျးအတှငျး သို့တဖငျြးဖငျြးပနျးထညျ့လိုကျလသေညျ။ ထို့နောကျခတ်ေတမအြနားယူကွပွီးနောကျ နောကျတခြီလိုးပှဲကွီး ထပျမံဆငျနှဲကွပွနျလသေညျ။ ဒီတဈခါတော့မကျြနှာကကျြတှငျလြှို့ဝှကျတပျဆငျထားသော ကငျမရာမှတဆငျ့ တိုကျရိုကျ ကွညျ့ရှုနသေောကိုမြိုးဝတေဈယောကျသူမတို့လိုးကွတာကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးမွငျနိုငျစရေနျရညျရှယျ၍ စိုးစိုးကကုတငျပျေါတှငျ လေးဘကျထောကျဖငျကုနျး၍အလိုးခံလသေညျ။ ထိုသို့စိုးစိုးစောကျပတျအတှငျးသို့တငျဝငျးလီးကွီးဖွငျ့ဝငျလိုကျထှကျလိုကျလိုးပေးနသေညျကို။ရှငျးရှငျးလငျးလငျးကွညျ့မွငျရသောကိုမြိုးဝေ မှာလညျးဂှငျးထုရငျး အကွီးအကယျြတခြီပွီးစီးသှားလသေညျ။
ဤသို့ဖွငျ့စိုးစိုးမှာယောကျကြားနှဈယောကျကိုတပွိုငျနကျကာမအရသာ ပေးစှမျးနိုငျစှမျးရှိသောမိနျးမတယောကျဖွဈလာလသေညျ။ ထိုနညေ့နကေ တငျဝငျးနှငျ့လူခငျြးခှဲတော့ စိုးစိုးတဈယောကျကတုနျ ကရငျဖွဈခါ ဒူးမြားပငျယိုငျနသေောဟူ၏ စိူးစိုးမှာတငျဝငျးနှငျ့တှပွေီ့းနောကျတဈရကျမှာပငျ သူတို့၏လိုးပှဲကို တိုကျရိုကျ ကွညျ့ပွီး စမာနျတကျနသေောကိုမြိုးဝေ၏ပူဆာမှုကွောငျ့ကိုမြိုးဝေ နှငျ့ပှဲဆကျရပွနျလသေညျ။ အစကတော့ အတှအေ့ကွုံအသဈ လူအသဈ ဟိုဟာအသဈမို့တငျဝငျးနှငျ့စိတျပါလကျပါရကေုနျရခေမျးလိုးပှဲ နှဈပှဲဆကျတိုကျဆငျနှဲခဲ့ရသဖွငျ့ ကိုမြိုးဝနှေငျ့ရကျမခွားဘဲတှဘေို့စိုးစိုး သိပျစိတိမပါခဲ့ပေ။သို့သျော ဝကျသားစားတာငွီးငှလှေ့သဖွငျ့ခဉျြပေါငျ ကြျောခဉျြခဉျြစပျစပျဖွငျ့ ထမငျးမွိနျလိုကျသျောလညျးနောကျတဈခါဗိုကျ ပွနျဆာတော့ ဝကျသားဟငျးကစားလို့ပွနျကောငျးနသေလိုဖွဈရပွနျ သညျ။ ထို့ကွောငျ့ထိုနကေ့ကိုမြိုးဝနှေငျ့ခြိနျး၍လိုးပှဲကွီးကငျြးပတော့လညျးစိုးစိုး မှာပငျပနျးခဲ့သမြှပွပြေောကျခါ။
အဟောငျးမအသဈဖွဈလကျြ ပွနျလညျ တကျကွှလနျးဆနျးနုပြိုလာရပွနျလသေညျ။ထို့အပွငျ ထိုနကေ့စိုစိုး ကိုတငျဝငျး၏အလိုးခံခြိနျစိုစိုး၏ခံစားမှုရသမြားကိုနှိုကျနှိုကျခြှတျခြှတျ မေးရငျးလိုးပေးသလိုစိုစိုးကလညျးသူမစိတျအတှငျးမှထကွှခဲ့သော တဏှာစိတျရိုငျးမြားကိုခရစေတှေ့ငျးကတြဈတဈခှခှပွနျပွောပွရငျးပကျ ပကျစကျစကျအလိုးခံလသေညျ။ ခဈြ မနကေ့သူ့လီးကွီးကိုခဈြစုပျပေးတာ ကို့လီးကိုစုပျပေးတုနျးကထကျပိုပွီးစိတိပါလကျပါရှိသလိုဘဲ နျော ကိုမြိုးဝကေစောကျရညျမြားဖွိုငျဖွိုငျယိုစီးကနြသေော စိုးစိုး၏စောကျဖုတျ လေးအတှငျး သူ၏အစှမျးကုနျတောငျမတျနသေောလီးကွီးဖွငျ့လိုးသှငျး ရငျးမေးလိုကျလသေညျ။ “အငျးပေါ့ ကိုကလဲ အဟငျ့ သူနဲ့ကဒီတဈခါမှပထမဆုံးကွုံရတော့ ဆိုတော့လေ ပိုပွီးဖီးလာသလိုဘဲ ဟငျ့ ဟငျ့ ပွီးတော့လေ သု့လီးက ကို့လီးလိုမဟုတျဘူး သူ့လီးဒဈကမပွဲသေးဘူးသိလား သူ့လီးကလေ ဖွဲပေးတာတောငျနညျးနညျးဘဲပှငျ့လာတာ အဲဒါကွောငျ့ခဈြကလဲ အသဲယားလာတာနဲ့တအားငုံစုပျပေးလိုကျမိတာပါ” ကိုမြိုးဝမှောစိုးစိုး၏စကားကိုနားထောငျရငျးသူ၏လီးကွီးမှာပိုမိုမာကွော တောငျထလာကာ။လိုးအားဆောငျ့အားမှာလညျးပိုမိုပွငျးထနျလာလေ သညျ။ဤသညျကိုအောကျမှအလိုးခံနရေသောစိုးစိုးကလညျးသိသညျ။
အရငျတုနျးက ကိုတိုး၏အလိုးကိုအကွိမျပေါငျးမြားစှာခံခဲ့ဘူး သျောလညျးယခုကဲ့သို့ အားပါသောဆောငျ့လိုးခကျြမြိုကိုမခံစားရခဲ့ဘူး ပေ။ ထိုကွောငျ့သူမမှာလညျးပိုမိုထိမိအရသာရှိနလေသေညျ။ထို့အပွငျ ယောကျကြားတဈယောကျနှငျ့အရှကျကုနျပကျပကျစကျစကျအလိုးခံ ခဲ့သညျမြားကိုအခွားယောကျကြားတဈယောကျအားပွဈပွဈနှဈနှဈပွနျ ပွောနရေသညျကသူမ၏ကာမစိတျမြားကိုလှုပျရှားနိုးကွှစလေသေညျ။ ထို့အပွငျထိုသို့ပွောပွနရေငျးနားထောငျသူယောကျကြားကသူမ စောကျပတျကိုဏှာစိတျပွငျးပွငျးဖွငျ့လိုးညှောငျ့ပေးနလေရောစိုးစိုး မှာတမူထူးခွားသောကာမအရသာတမြိုးကိုခံစားရရှိပွနျလသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ ” အငျး အား အီး ပွီးတော့လဲလေ သူလီးကပါကငျလီးလေး ကိုရဲ့ သိလား သူကဘယျစောကျပတျမှမလိုးဘူးသေးတာသခြောတယျကိုရဲ့ သူကလေ ဂှငျးတောငျဖွဈဖွဈမွောကျမွောကျထုဘူးပုံမကဘြူး ကိုရဲ့ သိလား ဒါကွောငျ့စိုးက ဒီလိုလူပြိုစငျလီးလေးကိုပါကငျဖှငျ့ရတော့မယျ ဆိုပွီးစိတျပါလကျပါ စုပျပေးမိတာပါ။
သူ့လီးကိုစုပျပေး လိုကျ တံတှေးနဲ့နူးအိလာတဲသူ့လခှေံလေးကိုအောကျဆှဲခလြိုကျနဲ့။ ဒဈပျေါအောငျ မနညျးဖှငျ့ယူရတာ ကိုရဲ့သိလား စိုးလညျးလစေိုးကို သူကထိဆောငျမထိဘဲနဲ့ သူ့လီးလေးကိုစုပျပေးနရောနဲ့ကို ဟိုလေ ဟို စိတျတှတေအားထလာတာ စိုးစောကျပတျလေးကအရညျတှကေို တတောကျတောကျကရြော ဟငျ့ ဟငျ့” အခုခြိနျတှငျတော့ ကိုမြိုးဝမှောသူ့တဈသကျတာတှငျမကွုံစာဘူးရာဂသှေး မြားအကွီးအကယျြထကွှလကျြ တဖုနျးဖုနျးတဖနျးဖနျးဖွငျ့စိုးစိုး စောကျပတျကွီးကိုအသကုနျဆောငျ့လိုးပေးနလေပွေီ။စိုးစိုးမှာလညျး မနကေ့ လူ့အသဈ လီးအသဈလအတှအေ့ကွုံသဈဖွငျ့ခံစားရရှိသော အတှအေ့ကွုံကတမြိုး ယခုမနကေ့အတှအေ့ကွုံကိုစမွုံ့ပွနျလကျြ ပွနျေပွာရငျး ဏှာစိတိသနျသနျဖွငျ့အလိုးခံနရေသညျကတမြိုးဖွငျ့ ထူးခွားဆနျးပွားသောကာမအရသာကိုနှဈမြိုးနှဈဖုံခံစားကနြေပျနေ လသေညျ။ “ပွီးတော့လေ အား သူ့လီးကွီးပျေါကိုစိုးစောကျပတျကွီးဖွဲပွီးထိုငျခလြိုကျရတာလညျးသိပျအရသာရှိတာဘဲ သိလားကို ဟငျ့ဟငျ့ အားရှီး လီးအသဈဆိုတော့စိုးကလညျးတအားစိတျထနတောလေ။
ပွီးတော့ဒီလီးကဘယျစောကျပတျမှမလိုးဘူးသေးတဲ့လီး အခုမှငါ့ စောကျခေါငျးထဲကိုပထမဆုံးဝငျတဲ့လီးဆိုပွီးတော့အရမျးဖီးတကျတာ ဘဲကိုရာ အာ့ အငျ့ ဆောငျ့ပေးကို အားကနကေို့ဆောငျ့ပေးတာစိုး ဖွငျ့ သိပျအားရတာဘဲနျော ဆောငျ့ကို ဆောငျ့ အားအခုတော့လညျး ကိုလိုးပေးတာကခံလို့ကောငျးနပွေနျရော့ အငျ့ ရော့ပါကိုရယျ ရော့ပါ စိုးစောကျပတျကွီးကှဲခငျြကှဲပါစတေော့ ဆောငျ့လိုးစမျးပါကိုရယျ အု အား အီး” ဤသို့ဖွငျ့စိုးစိုးမှာပွောရငျးပွောငျရငျးကိုယျ့စိတျကိုယျမထိနျးနိုငျတော့ဘဲ ဖငျကွီ့းဖွငျ့ပငျ့ခါပငျ့ခါအားရှိပါးရှိအလိုးခံရငျးသူမစောကျခေါငျးအတှငျး သားမြားက ကိုမြိုးဝလေီးခြောငျးကွီးကိုဖွဈညှဈစုပျယူရငျးစောကျရညျမြား ပနျးထှကျခါပွီးဆုံးခွငျးသို့ရောကျရှိသှားလတေော့သညျ။ကိုမြိုးဝမှောလညျးစိုးစိုးကဖီးအပွညျ့ဖွငျ့ပွောပွသညျကိုနားထောငျရငျး အားရပါးရဆောငျ့လိုးနရေငျးမကွုံစဘူးသောကာမအရသာကိုတစိမျ့စိမျ့ ခံစားရငျးသူ့လီးခြောငျးထဲမှသုတျရညျ ပူပူနှေးဗနှးဖွူပွဈပွဈမြားကိုစိုးစိုး ၏စောကျခေါငျးထဲသို့ပွညျ့လြှံအောငျပနျးထညျ့ပေးလိုကျလတေော့ သတညျး…. ပွီးပါပွီ။
ကိုမျိုးဝေနှင့်စိုးစိုးသည်ချစ်သူသက်တမ်း ၃ နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်သောချစ်သူများ ဖြစ်ကြလေသည်။တက္ကသိုလ်မှာကတည်းကချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီး ယခုတော့ကိုမျိုးဝေသည်အသင့်အတင့်အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လာပြီးစိုးစိုးကတော့ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် စူပါဗိုက်ဆာဖြစ် လာခဲ့လေပြီ။သူတို့နှစ်ဦးသည် တပါတ်တစ်ခါမှန်မှန်တွေ့ဖြစ်ကြပါသည်။ကိုမျိုးဝေကအဆင်ပြေသောလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ကား လေးတစ်စီးဝယ်ထားနိုင်သောကြောင့်စိုးစိုး၏ရုံးပိတ်ရက်တနင်္ဂနွေတွင် ကားလေးဖြင့်လာခေါ်ပြီးတစ်နေရာသို့သွားစားသောက်ကြသည်။ပြီး လျင်ဟော်တယ်သွားချစ်တင်းနှီးနှောကြသည်။တကယ်တော့ချစ်သူဖြစ် ပြီး ၆ လအကြာတွင်စတင်၍လိင်ဆက်ဆံဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ဘက်မိဘများကလည်းသိထားပြီးဖြစ်သည်မို့ပြဿနာလည်းမရှိခဲ့ပါ။ ကိုမျိုးဝေတစ်ယောက်ဒီထက်ပိုပြီးစုမိဆောင်းမိရှိလျင်လက်ထပ်ကြမည် ဆိုတာကသေချာနေသဖြင့်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်းမရှိပါ။သူတို့နှစ်ဦးသည် တခါတရံဟော်တယ်တွင်၎င်း တခါတရံလူရှင်းလျင်ကိုမျိုးဝေးအိမ်တွင်၎င်း ချစ်တင်းနှောဖြစ်ကြလေသည်။ စိုးစ်ုးသည်အပျိုစင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးကိုမျိုးဝေနှင့်ပထမအကြိမ်လိုင်ဆက်ဆံ တော့မှသာ ပါကင်အဖွင့်ခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။သူတို့နှစ်ဦးစတင်ဆက်ဆံ ဖြစ်သွားသည်ကကိုမျိုးဝေကားပေါ်တွင်သာဖြစ်လေသည်။ခါတိုင်းလိုပင် လူရှင်းသော်လည်းကားအသွားအလာမပြတ်သောလမ်းဘေးတစ်နေရာ တွင်ပွေ့ဖက်ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့ကြရာမှနှစ်ဦးစလုံးအရှိန်တက်ကာလွန် ကုးမိခြင်းဖြစ်လေသည်။ကားကလည်းမှန်အမဲနှင့်မို့လွတ်လပ်တာ ကြောင့်လည်းပါသည်။ထိုစဉ်ကစိုးစိုးတစ်ယောက်ကိုယ်ဝန်တားဆေးများဝယ်သောက်ခဲ့ရသော်လည်းရေရှည်စွဲသောက်ရန်မသင့်တော်သဖြင့် သားအိမ်အတွင်ကြေးကွင်းထည့်၍ ကာကွယ်ထားရလေသည်။ အခုတော့ နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကာလအတွင်းသူတို့နှစ်ယောက်ပုံစံ မျိုးစုံဖြင့်လိင်ဆက်ဆံဘူးကြလေပြီ။ အပြာကားများ အပြာစာအုပ်များ ထဲမှတွေ့ဘူးကြာဘူးဖတ်ဘူးသည့်ပုံစံများအတိုင်းဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ် ဆက်ဆံဘို့ပုံစံအသစ်မကျန်တော့သလောက်ပင်ဖြစ်နေ လေပြီ။
နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း လိင်ဆက်ဆံရာမှရရှိသောကာမအရ သာကိုတနေ့ထက်တနေ့ပိုမိုစွဲလန်းနှစ်ခြိုက်လျက်ရှိနေကြပေပြီ။တဖြေး ဖြေးနှင့်ရင်ထိတ်သည်းဖိုခံစားကာ ကာမဆက်ဆံရသည်ကိုလည်းသ ဘောကျလာကြသည်။ဥပမာ- မလွတ်မလပ်ကားထဲတွင် ကာမဆက်ဆံ ကြရတာမျိုး လူအများချောင်းကြည့်နိုင်သောနေရာတွင်ကမန်းကတန်း ကာမဆက်ဆံရတာမျိုး လူရှိသော်လည်းအနည်းငယ်ရှင်းလင်းသော နေရာမျိုးတွင်မသိမသာတစ်ယောက်လိင်အင်္ဂါကိုတစ်ယောက်ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်၍အဆုံးအစွန်အထိရောက်သွားတမျိုးတို့ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့သည်းထိတ်ရင်ဖို လှုပ်ရှားရသည်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကနှစ်ခြိုက်သည်။ရင်တခုန်ခုန်ဖြင့်ဆက်ဆံရသောအရသာကိုသဘောကျလာကြ သည်။ တစ်ယောက်အင်္ဂါကိုတစ်ယောက်ကစုပ်ယက်ပေးလျက်ပြီးဆုံးစေ တာမျိုးကတော့ရိုးတောင်သွားနေပြီဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့်ကြာလာတော့ကိုမျိုးဝေကအဆန်းထွင်ပြန်သည်။အဲဒါကတော့ စိုးစိုးကိုမလုံ့တလုံ ခပ်ဟော့ဟော့ဝတ်စားဆင်ယင်စေလျက် လူကြား ထဲတွင် သွားလာလှုပ်ရှားစေခြင်းဖြစ်လေသည်။သူကတော့တစ်နေရာ ကစောင့်ကြည့်သည်။စိုးစိုးကအရပ် ၅ ပေ နှစ်လက်မ နို့အုံထွာထွား တင်ကားကားဖြင့်မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းသူမခပ် ဟော့ဟော့ ဆက်စီကျကျဝတ်စားသွားလျင်ယောက်ကျားကြီးကြီး ငယ်ငယ်အရွယ်မရွေးဝိုင်းကြည့်ကြသည်။
အာသာရမ္မက်မျက်လုံးများ ဖြင့်ကြည့်ကြသည်။တချို့ကကြည့်ရုံသာကြည့်သော်လည်းတချို့က အနားကပ်၍ထိကပါးယိကပါးလုပ်ချင်သည်။လိင်စကားခပ်ကြမ်းကြမ်း များပြောကြသည်။စိုးစိုးကအစပိုင်းမျက်နှာလေးရဲသွားသော်လည်း နောက်ပိုင်းကျတော့သည်လောက်မဟုတ်လှတော့။စိတ်ထဲကတော့ရင် ဖိုလှုပ်ရှားမိသည်။ သွေးသားစီးဆင်းမှုများလည်းမြန်ဆန်လာသည်။ ဟိုဟာလေးထဲကလည်း ယားကျိကျိလိုလိုဘာလိုလိုဖြစ်လာသည်။ ထိုမှပြန်လာပြီးဟော်တယ်ခန်းထဲတွင်လိင်ဆက်ဆံကြသောအခါကိုမျိုးဝေ ကလိင်ဆက်ဆံရင်းခရေစေ့တွင်းကျမေးသည်။မေးရင်းလိုးသည်။ ” သဲ ဟိုဆံပင်နီကြောင်ကြောင်ဆေးဆိုးထားတဲ့ကောင်လေးတွေက စိုးအနားကပ်လာပြီး ဘာတွေပြောတာလဲ။ဘာလုပ်သွားသေးသလဲ။ ကို့နေရာကအဲဒါတော့သေချာမမြင်ရဘူး ” ” ဟင့် ကိုကလဲ ကိုက ချစ်ကို အတိုအပြတ်တွေဝတ်ခိုင်းထားတာကိုး။
ကောင်လေးတွေကစိုးနားကပ်လာပြီး တင်ပါးတွေကိုမထိတထိပွတ်ပေး တယ်။ပေါင်တွေကလည်းပေါ်နေတော့ ပေါင်သားလေးတွေကိုလည်း ဟင့် ဟင့် ကပ်ပွတ်သွားတာပေါ့” ” အဲဒီတော့ သဲစိတ်ထဲဘယ်လိုနေသလဲ ဖီးမတက်ဘူးလား” “ဟာ ကိုကလည်း ချစ်က ဖီးတက်စရာလားလို့ ဟင့် ကိုနော်” စိုးစိုးကကိုမျိုးဝေ၏လိုးဆောင့်ချက်နှင့်အညီဖင်ကလေးကိုကော့ပေးရင်း ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ တကယ်တော့ ကိုမျိုးဝေကသူမကိုမချစ်လို့ တန်ဘိုးထားလို့မဟုတ်မှန်းစိုး စိုးသိပါသည်။ဤကိစ္စသည် လိင်ဆက်ဆံရာတွင်နှစ်ဦးစလုံးပိုမိုကောင်း မွန်သောအရသာအသစ်ကိုခံစားရရှိစေဘို့ရည်ရွယ်မှန်းလည်းသိပါ သည်။
သို့သော်မိန်းမသဘာဝအတိုင်းမူလည်းမူ အနည်းငယ်လည်း ရှက်တက်တက်ဖြစ်နေသဖြင့် ဤသို့ပြောလိုက်ခြင်းသာဖြစ်လေသည်။ ” သဲကလည်းကွာ အမှန်အတိုင်းကို့ကိုပြောပြပါ။ရှက်မနေပါနဲ့။ပြီး တော့ သူတို့ဘာတွေပြောသွားလဲ” ” အဟင့် ဟင့် ကိုနော် သူတို့ကအမကသိပ်တောင့်တာဘဲတဲ့ ဖင်ကြီး တွေကိုကားနေတာဘဲတဲ့ အမကိုကုန်းခိုင်းပြီးနောက်ကနေဆောင့်လိုး လိုက်ရရင်လီးထဲမှာဆိမ့်သွား မှာဘဲတဲ့ ဟင့် ဟင့် အဲဒါကို့ကြောင့်။သဲအဲဒီလိုအပြောခံရတာ သဲဝတ်သွားရတာကလည်းကြည့်ပါအုံး ဟင့် ဖင်တောင်ပေါ်တော့မယ် ဟင့် ” စိုးစိုးကပါးစပ်ကသာထိုသို့ပြောလိုက်သော်လည်းသူမစောက်ပတ် အတွင်းကြောများက ကိုမျိုးဝေလီးကြီးကိုတင်းခနဲညှစ်ပေးလိုက်သည်။ ခါတိုင်းထက်ပို၍ညှစ်အားပြင်းထန်သည်ဟုထင်ရလေသည်။ တကယ်တော့ကိုမျိုးဝေကလည်းစိုးစိုးသူ့အပေါ်ချစ်မှန်းသိပါသည်။စိတ်ထဲ မှဖောက်ပြားလိုစိတ်မရှိမှန်းလည်းသိပါသည်။သို့သော်သဘာဝအရ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်နီးကပ်စွာထိတွေ့မိလျင် သာယာစိတ်ဖြစ်ပေါ် တတ်သည်ကိုနားလည်ပါ၏။ ထို့ကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လိုးကြ ညှောင့်ကြပြီဆိုလျင် ဤကိစ္စဘက်တွင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံ သာကပိုကောင်းသည်ဟုသူကယူဆသည်။ “အဲ့လိုအပြောခံရတော့ သဲဘယ်လိုခံစားလိုက်ရသလဲ” “အင်းပေါ့ အဲ့လိုအပြောခံလိုက်ရတော့ သဲလေရှက်လည်းရှက်တယ် စိတ်ထဲကလည်းယားကျိကျိဖြစ်လာတယ် ဟိုဟာကလည်းယားလာသလိုလိုဘဲ” သူမကထိုသို့ပြောလိုက်သဖြင့် အပေါ်မှလိုးဆောင့်နေသောကိုမျိုးဝေ၏လီး ကြီးမှာပိုမိုတင်းမာလာပြီး။
ဆောငိ့အားမှာလည်းပိုမိုပြင်းထန်လာနေသည်ကိုစိုးစိုးသတိထားလိုက်မိလေသည်။ ထို့ကြောင့် “အင်းနော် သူတို့ကိုသိတာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ ပြီးတော့ချစ်တာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ သဲစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်လာတာ သိလား ကို” “အင်းပါ အဲဒါဆိုရင် ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူး တစိမ်းယောက်ကျားတစ် ယောက်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရလို့သူကတက်လိုးပေးရင် သဲက ခံမှာလား” “ဒါကတော့ ကိုရယ် ပုံဆိုးပန်းဆိုးညစ်တီးညစ်ပတ်ကြီးမဟုတ်ဘူး သူကလည်းသဲကိုကြင်ကြင်နာနာဆက်ဆံပေးတယ်ဆိုရင် ပြီးတော့ ကိုကလည်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ အဟိ” နားထောင်နေသာကိုမျိုးဝေ၏လီးကြီးမှာစိုးစိုး၏စောက်ခေါင်းအတွင်းထဲ တွင်တင်းခနဲဖြစ်သွားပြီးခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးပေးလိုက်သလိုစိုးစိုး၏ စောက်ပတ်အတွင်းသားများကလည်းခါတိုင်းထက်ပိုမိုသန်မာစွာလီး ကြီးကိုညှစ်ဖမ်းစုပ်ယူလိုက်လေသည်။စောက်ရည်များကလည်းယခင် ထိုပိုမိုများပြားစွာစိမ့်ကျလာလေသည်။ ထိုနေ့ကနှစ်ယောက်စလုံးခါတိုင်းထက်ကာမစိတ်ပိုမိုပြင်းထန်စွာလိုးကြ ခံကြရင်း။ မတူထူးခြားသောလောကီစည်းစိမ်ကိုခံစားလျက်ပြိုင်တူ အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်သွားကြလေသည်။အားလပ်ရက်တစ်ရက်တွင်တော့ကိုမျိုးဝေကစိုးစိုးကိုခပ်ဟော့ဟော့ဆက်စီ ကျကျဝတ်စားစေလျက်ဘတ်စ်ကားစီးကြလေသည်။
ထိုကားပေါ်တွင် တစ်ယေက်တစ်နေရာခွဲနေကြရန်ဖြစ်သည်။ လူကြပ်သောကားကိုရွေး စီးကြပြီးကားပေါ်တွင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်မဟုတ်လျင် အထိအတွေ့ အပွတိအသပ်ခံရန်နှင့်နောက်မှထောက်တာကိုခံရန် နှစ်ယောက်သ ဘောတူထားကြလေသည်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်ရောက်တော့စိုးစိုးက ဂျောင်လေးတစ်ခုဆီသို့တိုးဝင် သွားသည်။စိုးစိုးဝတ်လာသောဆက်စီကျကျခပ်ဟောဟော့ပုံစုံကြောင့် တိုးဝင်သွားသောအခါ ဟိုထိဒီထိလုပ်ချင်သူများကိုတဒေါင်ဆစ်ဖြင့် တွတ်သွားရသည်။မျက်နှာကိုလည်းခပ်တည်တည်ခပ်တင်းတင်းလုပ် ထားသောကြောင့်လူတော်တော်မျာများဘေးသို့ရှဲသွားကြသည် ။ ထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့ လူငယ်လူရွယ်များကမျက်နှာထားကိုရှိန် ပြီး ရှဲ သွားကြသော်လည်း။ ဦးလေးကြီးများကတော့ခပ်တည်တည်ပင် စိုးစိုးနားသို့တိုးကပ်ကြသည်။စိုးစိုးဂျောင်လေးထဲမှာကားပြတင်းပေါက် ဘက်မျက်နှာမူရပ်လိုက်တော့စိုးစိုးတင်ပါးကြားထဲကိုနောက်ဘက်မှအံဝင်ဂွင်ကျလာထောက်သူမှာဦးလေးကြီးတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သည်။
စိုးစ်ုးမသိမသာအကဲခတ်လိုက်တော့ ထိုဦးလေးကြီးမှာအသက် ၄၀ ကျော်ကျော်ခန့်ဖြစ်မည်။စမတ်ကျကျဂိုက်ကောင်းကောင်းဖြင့်ဖြစ် သည်။စိုးစိုးကိုလာမထောက်ဘဲလမ်းမှာသာတွေ့မိလျင်ဒီလိုဏှာဘူးကြီး ဟုထင်ရက်စရာမရှိ။ရည်ရည်မွန်မွန်ခပ်သန့်သန့်ဖြစ်သည်။သို့သော်စိုး စိုး၏ချစ်သူကိုမျိုးဝေပြောသလို ဘယ်သူမှမသိဘဲ အိပ်ရာပေါ်မှာနှစ် ယောက်ထဲတွေ့လျင်လက်ခံနိုင်သည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေသည်။ထို့ကြောင့် စိုးစိုးအသာငြိမ်နေလိုက်သည်။ နောက်ကဦးလေးကြီးက ကားလှုပ်တိုင်းအခွင့်ကောင်းယူ၍ စိုးစိုး၏ ဖင်ကြားထဲကိုဖိကပ်ညှောင့်နေသည်။သူထောက်ထားတာကဖင်ကြား ထဲတွင်ကွက်တိဖြစ်နေသဖြင့်စိုးစိုးခမျာရင်တဖိုဖိုအသဲတယားယားဖြစ် နေသည်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမသိမသာအကဲခတ်လိုက်မိတော့သူတို့ ကိုဂရုစိုက်မိသူမရှိ။ ဤသို့ဖြင့်စိုးစိုးတို့ကားပေါ်ကဆင်းတော့ စိုးစိုးတစ်ယောက် အတော် စိတ်ထနေပြီဖြစ်သည်။ကိုမျိုးဝေကားကိုထားခဲ့သောကြောင့်တက္ကစီတစီး ကိုစိုးစိုးကိုယ်တိုင်တားကာသွားနေကျဟော်တယ်သို့မောင်းနှင်စေသည်။ ကိုမျိုးဝေကလည်းစိုးစိုးရွနေပြီဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိသည်။ပြုံးစိစိမျက်နှာပေးဖြင့် လိုက်လသည်။ဟော်တယ်အခန်းထဲသို့ရောက်တော့စိုးစိုးအဝတ်အစား များကိုကမန်းကတန်းချွတ်ခါကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ကို တိုးကစိုးစိုးကို စချင် ညစ်ချင်သဖြင့်အေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေသည်။ အဝတ်အစားများကိုတစ်ထည်ချင်းချွတ်နေသည်။ဒါကိုစိုးစိုးကလည်း သိသည်။
မျက်စောင်းခဲ၍အံကြိတ်ပြကာကုတင်ပေါ်မှောက်ရက်ပြောင်း အိပ်လိုက်သည်။စိုးစိုး၏တင်ပါးသားကလေးများမှာလုံးထစ်ပြီးမို့မောက် နေသည်။ကိုမျိုးဝေကစိုးစိုးဖင်သာလေးများကိုပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ဖြစ်ညှစ် လိုက်ပြီး။ စိုးစိုး၏ဖင်အကွဲကြောင်းတလျှောက်သူ၏လီးထိပ်ကြီးဖြင့်ထိုး သွင်းပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ “ချစ်ကိုကားပေါ်မှာတုန်းက ဟိုဦးလေးကြီးကဒီလိုဘဲထောက်ပြီး ပွတ်ပေးနေတာလား” ကိုမျိုးဝေပြောလိုက်မှစိုးစိုးတကိုယ်လုံးတုံတက်သွားသည်။ ” ဟင့် အင်းပေါ့ ကို ကချစ်ကိုစကပ်တိုတိုအသားပျော့ပျော့လေးဝတ်ခိုင်း သွားတော့ သူ့ဟာကြီးကချစ်ဖင်ကြားထဲတကယ်ညပ်လာသလိုဘဲ အိ ဟင့် ဟင့်” ကိုမျိုးဝေကလီးကိုနည်းနည်းလေးခေါင်းစိုက်လျက်ဖင်ကြားအောက်မှလျှို ၍စိုးစိုး၏စောက်ဖုတ်ကလေးမမှီ့တမှီလှမ်းတို့ပေးလိုက်သည်။သူကထောက်ပေးတော့ ချစ်ကဖင်ကလေးကော့မပေးလိုက်ဘူးလား” ” ကိုနော် ရှက်စရာ တအားတိုးထောက်လာတော့ သဲလည်းဖင်ကလေး ကိုမသိမသာကောက်ပေးလိုက်တာပေါ့ လို့ ဟင့် အဟင့် ဒါပေမဲ့ တကယ်တော့ထိမိရုံလေးပါ အဝတ်တွေကလည်းခံနေတော့ ဘယ်ထိနိုင်ပါ့မလဲ ဒါပေမဲ့ သိလားကို အဲ့လိုလေးကသဲစိတ်ကိုတအား ထလာစေတာဘဲ ကိုရယ် ဟင့် ဟင့်”။ စိုးစိုးကခေါင်းအုံးတလုံးကိုဆွဲပြီးမှောက်ထားသောသူမဗိုက်အောက် ဆွဲသွင်းလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်သူမ၏ဖင်တုံးကြီးများမှာခုံးတက်လာ ပြီး စောက်ပတ်လေးကအာတာတာလေးပေါ်လာသည်။စောက်ရည်များ ကတအားရွှဲနစ်နေလေပြီ။ကိုမျိုးဝေကသူ့လီးကြီးကိုစိုးစိုးစောက်ပတ်လေး ထဲသို့ခပ်ဖြေးဖြေးထိုးသွင်းလိုက်ရင်း – “တကယ်လို့ အခုချစ်စောက်ဖုတ်ထဲလိုးသွင်းနေတဲ့လီးကြီးက ကား ပေါ်ကဟိုလူကြီးရဲ့လီးကြီးဆိုသဲဘယ်လိုနေမလဲ ဟင်” ” အာ ကိုကလဲ သိဘူးကွာ ခုသဲကိုခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပေးပါတော့” “အင်းပါ ဆောင့်ပေးမှာပေါ့။
သဲကလည်းကို့စိတ်ကိုသိသားနဲ့ ဖြေပေးစမ်းပါကွာ ရှက်မနေပါနဲ့ ဖီးယူချင်လို့ဟာကို ” စိုးစိုးကသူမဖင်ကြီးကိုလှုပ်ခါလိုက်ရင်း “။ဆို ချစ်အမှန်အတိုင်းပြောမယ်နော်။ကို သဲကိုအထင်မသေးရဘူး” “ဟာ သဲကလဲ ကို့စိတ်ကိုသဲသိသားနဲ့ သဲကိုအထင်လည်းမသေးဘူး အချစ်လည်းပေါ့ဘူး ပိုတောင်ချစ်လာအုံးမှာ” စိုးစိုးကသူမဖင်ကြီးကိုပြန်လှန်တိုးကပ်ပေးရင်း”။ အင်းပါ ဒါဆိုသဲပြောမယ် နည်းနည်းလောက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေး သဲ စောက်ပတ်ကြီးကိုဆောင့်လိုးလိုက်စမ်းပါအုံး” ကိုမျိုးဝေကလည်း တော်တော်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည်။ ” အား အင့် အီး ထိတယ်ကွာ အု အီး ဟင့်အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သဲလေ အင့် အဲဒီတုန်းကစိတ်တအားပါလာတာ သိလား သဲဟာလေးထဲကယားတက်လာတာ ဘယ်သူမှမသိလူးဆိုင်ရင် သဲကသူလိုးတာခံလိုက်ချင်တာလေ အား အီး သူကတခါမှမကြုံဘူး သေးတဲ့လူဆိုတော့ အမြဲအလိုးခံနေတဲ့ ကိုလိုးတာထက်ပိုပြီးသဲ ရင်ခုန် မိလိမ့်မယ်ထင်တယ် သိလား ဟင့် ဟင့် အား ကို နာနာစောင့်” စိုးစိုးကပြောရင်းကစောက်ပတ်ကလေးရှုံ့သွားမိသလိုစောက်ရည်များ ကထပ်မံ၍ယိုစီးထွက်လာသည်မှာခုထားသောခေါင်းအုံးပင်စိုသွားလေ ပြီ။စိုးစိုး၏ပြောစကားကြောင့်ကိုမျိုးဝေ၏လီးကြီးမှာပိုမိုတင်းမာကြီးထွား လာပြီး။
လိုးဆောင့်ချက်များမှာလည်းမြန်ဆန်သွက်လက်လာလေသည်။ ကိုမျိုးဝေကအပေါ်မှဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ဆောင့်လိုးရင်း ” အား သဲရယ် ကောင်းလိုက်တာ ဟီး အခုသဲကိုလိုးဆောင့်ပေးနေတာ အဲဒီလူကြီးဆိုရင်ရော သဲဘယ်လိုနေမလဲ ဟင်” “အဟင့် တကယ်သာသူဆိုရင်တော့ ဟင့် ဟင့် အား အမယ်လေး ဦးရယ် သဲစောက်ပတ်ကြီးကိုဦးလီးကြီးနဲ့လိုးပေးလိုက်စမ်းပါ ရော့ပါဦးရယ် လိုးလိုက်စမ်းပါ အားမနာတမ်းလိုးလိုက်စမ်းပါလို့ အော်မှာပေါ့ အင့်….အ… အီး ဆောင့်လိုက်စမ်းပါကိုရယ် ဆောင့်ပေးလိုက်စမ်းပါ အာ့ အီး သဲပြီးပြီကို အား သဲပြီးသွားပြီ အဟင်း ဟင်း ဟင်း ” စိုးစိုးမှာသူ့အပြောနှင့်သူဖီးအရမ်းတက်သွားးပြီး ကိုမျိုးဝေ၏လီးကြီးကိုအခါ တိုင်းထက်ပိုမိုစိတ်ထက်သန်စွာအားရပါးရညှစ်ဆွဲစုပ်ယူပြီးစောက်ရည် ဖြူဖြူပြစ်ပြစ်များပန်းထုတ်ကာ လောကစည်းစိမ်ကိုအပြည့်အဝခံစားရရှိ ရင်းပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ရှိသွားလေသည်။သူမစိတ်ထဲတွင်အခုလိုအပြင် လူတစ်ယောက်ကလိုးပေးနေသည်ဟုစိတ်ကူးပြီးအလိုးခံလိုက်ရသည်က။ ခါတိုင်းကိုမျိုးဝေလိုးပေးသည်ကိုခံ၍ပြီးဆုံးသည်ထက်ပိုမိုအရသာပြည့်ဝ သည်ဟုထင်လိုက်မိလေသည်။ထို့အတူကိုမျိုးဝေကလည်း စိုးစိုးစောက်ခေါင်းထဲသို့ပူနွေးစေးပျစ်သော လီးရည်များအပြည့်ပန်းထည့်ပေးလိုက်ရင်းသူ့ကောင်မလေးစိုးစိုးကအခြားတစ်ယောက်နှင့်အလိုးခံနေရင်းဖီးတက်နေသည်ကိုစိတ်ကူးထဲတွင်မြင်ယောင်ပြီးလိုးလိုက်ရသည်မှာခါတိုင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အရသာရှိလွန်းလှသည်ဟုခံစားမိလေသည်။ ဤသို့ဖြင့် စိုးစိုးနှင့်ကိုမျိုးဝေသည်တပါတ်လျင်တစ်ခါလောက်ဘတ်စ်ကား တိုးစီးကာ စိတ်ကူးထဲမှအပြင်လူတစ်ယောက်ကလစိုးစိုးကိုလိုးပေး နေတာကိုစိတ်တူကိုယ်တူအမေးအဖြေလုပ်ရင်းလိုးပွဲကြီးများဆင်နွှဲခဲ့ ကြသည်မှာ လေးငါးကြိမ်ရှိခဲ့လေပြီ။ ဤတွင်ကိုမျိုးဝေကတဆင့်တက်ခါ အပြင်လူတစ်ယောက်နှင့်စိုးစိုးကို လက်တွေ့တကယ်တမ်းပေးလိုးချင်စိတ်ပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်။
ထိုအချိန်တွင် စိုးစိူးစိတ်ထဲတွင်လည်းကိုမျိုးဝေမဟုတ်သောအခြားလူ တစ်ယောက်နှင့်တကယ်အလိုးခံကြည့်လိုက်ချင်စိတ်များတဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်လေသည်။ ဤသို့ဖြင့်ကိုမျိုးဝေက သူ့ဆန္ဒကိုစိုစိုးအားပြောပြသောအခါ စိုးစိုးက အနည်းငယ်ငြင်းဆန်သလိုလုပ်ပြီး “ကို’ ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ပြီးတာပါဘဲဟု သဘောတူလိုက်လေသည်။ဤသို့ဖြင့် ကိုမျိုးဝေနှင့်စိုးစိုးတို့သည် စိတ်ချယုံကြည်ရလောက်သောကျန်းမာသည့်အပြင်လူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေကြလေတော့၏။ကိုမျိုးဝေ၏ သဘောထားမှာ ပထမပိုင်းတွင် ထိုလူစိမ်းစိတ်ထဲတွင်ကိုမျိုးဝေမသိဘဲ စိုးစိုးကအလိုတူသည်ဟုထင်မြင်ယူဆစေရမည်ဟုဖြစ်လေသည်။ ဤနေရာတွင်တော့စိုးစိုးနှင့်အခြေအတင်ငြင်းခုံရလေသည်။စိုစိုးက ကိုမျိုးဝေမသိဘဲထိုလူနှင့်အတူနေသည်ဆိုလျင်ထိုလူကစိုးစိုးကို ဖောက်ပြန်သောမိန်းမတစ်ယောက်ဟုအထင်သေးမည်ကိုမခံလိုခြင်းဖြစ် လေသည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်တော်တော်ကြာအငြင်းပွားကြပြီးကိုမျိုးဝေနှင့်စိုစိုးချစ်သူ များဖြစ်နေမှန်းမသိသောအခြားတစ်ယောက်ဖြင့်စိုးစိုးကရည်းစားထား ၍မြူဆွယ်အလိုးခံရန်သဘောတူကြလေသည်။ ထိုသို့အလိုးခံရာတွင် အစ၌စိုးစိုးကအလိုးခံလိုက်ပြီးကိုမျိုးဝေကိုအသေးစိပ်ပြန်ပြောရန်နှင့် အဆင်ပြေပါကစိုးစိုး၏ဖုန်းကိုဟိုလူမသိစေဘဲဖုန်းကိုစပီကာဖွင့်လျက် အလိုးခံရန်။အကယ်၍ တတ်နိုင်လျင် ဟိုလူမသိစေရန် ဖုန်းဖြင့် ဗွီဒီယိုကော ဖွင့်လျက်ကိုမျိုးဝေကို တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုရန်တို့ကိုအစီအစဉ်ဆွဲ ကြလေသည်။
ဤသို့ဖြင့်နှစ်ယောက်စိတ်တိုင်းကိလူရှာကြရာတော်တော်နှင့်ရှာမတွေ့ ချေ။ကိုမျိုးဝေကသဘောကျသူကိုစိုးစိုကမကြိုက်။တဖန်စိုးစိုးကနှစ်ခြိုက် သူကိုကိုမျိုးဝေကသဘောမကျဖြင့် အတော်ကြာအလုပ်မဖြစ်ကြပေ။ တွေ့မဲ့တွေ့တော့စိုးစိုးတို့ရုံးတွင်အတူအလုပ်လုပ်နေသောစိုးစိုးထက် ရာထူးတဆင့်နိမ့်ပြီးအသက်လည်းငယ်သောကောင်လေးတစ်ယောက် ကိုသွားတွေ့လေသည်။ထိုကောင်လေးမှာကုမ္ပဏီတွင်စိုစိုးအလုပ်ဝင် ပြီးနောက်မှအလုပ်ဝင်လာသူဖြစ်ပြီး စိုးစိုးတွင်ရည်းစားရှိမှန်းမသိဘဲ စိုးစိုးကိုလိုက်ဘူးသူဖြစ်လေသည်။စိုးစိုးကသူမတွင်ချစ်သူကိုမျိုးဝေရှိနေ ကြောင်းငြင်းပယ်လိုက်သဖြင့်နောက်ဆုတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ သော်ထိုကောင်လေးမှာစိုးစိုးကိုအစ်မတယောက်လိုဆက်ဆံလျက်ရုံး တွင်စိုးစိုး၏အလုပ်များတွင်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေလေသည်။ထမင်းစား ချိန်များတွင်လည်းထမင်းချိုင့်ခြင်းဆုံလျက် အတူထမင်းစားကြသလို အလုပ်ပါးချိန်များတွင်စိုးစိုးကသူ့ကိုခေါ်လျက် နှစ်ယောက်အတူတူ မုန့်ထွက်စားတတ်လေသည်။ စိုးစိုးကသူမကိုထိုကောင်လေးစလိုက်ခါစက ကို သာမရှိရင်ဟု စိုးသူ့ ကိုလက်ခံလိုက်မှာဟု ကိုမျိုးဝေကိုပြောပြဘူးလေသည်။
စိုးစိုးကထို ကောင်လေးနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေသလဲဟုကိုမျိုးဝေကိုပြောပြသောအခါ ကိုမျိုးဝေကလည်းသေချာလေ့လာစုံစမ်းပြီးသဘောတူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ထိုကောင်လေးအမည်မှာ တင်ဝင်းဟုခေါ်ပြီးစိတ်ထားဖြူစင် ဖြောင့်မတ်ပြီးရိုးသားပွင့်လင်းသူဖြစ်သည်ဟုစိုးစိုးကကိုမျိုးဝေကိုပြောပြလေသည်။
ထို့ကြောင့်ရုံးတွင်စိုးစိုးက ကိုမျိုးဝေနှင့်ပြတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကျေညာ၍ တင်ဝင်း၏အချစ်ကိုလက်ခံလိုက်ရန်ဖြစ်လေသည်။ ကိုမျိုးဝေကလည်း စိုးစိုး၏ကုမ္ပဏီသို့အရင်ကထဲကအရောက်အပေါက်နဲသူဖြစ်သဖြင့် ပြဿနာသိပ်မရှိလှပါ။ ဤသို့ဖြင့် စိုးစိုးကတင်ဝင်း ချစ်ရေးဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်အပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်ချိန်းတွေ့သောနေ့သို့ရောက်လာလေသည်။ထိုသို့စိုးစိုးနှင့်တင်ဝင်းတို့ချိန်းဆိုထားသောရက်မတိုင်မီ စိုးစိုးတို့ချစ်သူ နှစ်ယောက်ဟော်တယ်ခန်းငှားကြသည်။ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟုဆိုသော် လည်း အခန်းငှားရာတွင်စိုးစိုးမပါပါ။ကိုမျိုးဝေတစ်ယောက်ထဲဟော်တယ် တွင်နှစ်ယောက်ခန်းယူလိုက်သည်။ထိုအခန်းတွင်သူတစ်ယောက်ထဲည အိပ်ပြီး အခန်းမျက်နှာကျက်မီးလုံးဘေးတွင်။ဖုန်းမှအင်တာနက်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သော ကင်မရာအသေးလေးတလုံးကိုနှစ်ဖက်တိတ်ဖြင့်ကပ်၍တပ်ထားလိုက်သည်။ မသိသာကြောင်းသေချာအောင်လုပ်သည်။ထိုညကကိုမျိုးဝေ ထိုဟော်တယ်တွင်တစ်ညအိပ်လိုက်သည်။မနက်ကျမှစိုးစိုးရောက်လာသည်။ စိုးစိုးရောက်လာတာကို ကိုမျိုးဝေကဟော်တယ်ဧည့်ခန်းမှပင်ကြိုဆိုပြီး ဟော်တယ်ဧည့်ကြိုဌာနကိုသူစိုးစိုးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပြီး သူ့ညီမ လင်မ ယား အခန်းဆက်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကာအခန်းသော့ကိုလွှဲပြောင်း ပေးခဲ့သည်။ဟော်တယ်ငှားရမ်းခကိုလည်းနှစ်ရက်စာရှင်းပေးခဲ့သည်။ ကိုမျိုးဝေထွက်သွားတော့စိုစိုးလည်းငှားရမ်းထားသောအခန်းတွင်းသို့ ဝင်လိုက်သည်။ကိုမျိုးဝေကပ်ထားသော ကင်မရာပေါက်စလေး ကိုကြည့်ပြီး မသိသာနိုင်ဟုတွေးကာကျေနပ်သွားသည်။ထို့နောက် တင်ဝင်းထံဖုန်းဆက်သည်။
” ဟယ်လို မောင်လား မပါ။မောင်လာရင် စမ်းချောင်း ဓမ္မစေတီလမ်း က ဟော်တယ်ကိုလာခဲ့နော်မောင် အင်း ထမင်းစားပြီးနေ့လည်တစ်တနာရီလောက်လာခဲ့ပေါ့။ အင်း အဲဒီဟော်တယ်က မ ကိုမျိုးဝေနဲ့တုန်းကတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက် ရောက်ဘူးထားတာပါ။မအရင်ရောက်ပြီးအခန်းယူထားလိုက်မယ် အင်းပါမောင်ရယ် သူ့နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေမေ့ပစ်လိုက်ပါပြီ။ မောင့်ကိုပဲချစ်တာပါ” ထို့နောက်စိုးစိုးသည်အချိန်ရသေးသဖြင့် ကိုမျိုးဝေထံဖုန်းဆက်ပြီးကင်မရာ ကိုစမ်းသည်။တကိုယ်လုံးတုံးလုံးချွတ်ပြသည်။အိပ်၍ကားပြ ကုန်းပြ လမ်းလျှောက်ပြသည်။ကျေနပ်ပြီးဆိုမှအဝတ်အစားများပြန်ဝတ်ထား လိုက်သည်။ကင်မရာစမ်းရင်းနှင့်ပင်စိုးစိုးဟာလေးအတော်စိုသွား သည်။အချိန်လိုသေးသဖြင့်နေ့လယ်စာကိုအပြင်ထွက်စားက အချိန်နီး မှပြန်စောင့်နေလိုက်သည်။ တင်ဝင်း ရောက်လာတော့အခန်းနံပါတ်ကြိုပြောထားသဖြင့်ဟော်တယ် ဧည့်ကြိုက အခန်းထိလိုက်ပို့သည်။အခန်းထဲရောက်တော့တံခါးပိတ် ပြီးတာနဲ့ထွန်းလွင်က စိုးစိုးကိုအတင်းဖက်နမ်းသည်။ဆာလောင်မွတ် သိပ်ပြင်းပြသောလူပျိုလေး၏အနမ်းကြောင့် စိုးစိုးမှာစောက်ဖုတ်တစ်ခု လုံးစောက်ရည်များရွှဲနစ်သွားသည်။
” ဟင့် ဖယ်ပါအုံးမောင်ရယ် မ ဘယ်မှထွက်မပြေးပါဘူး မ အဝတ်အ စားတွေချွတ်ပါရစေအုံး မောင်လည်းချွတ်လေ” တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အပြန်အလှန်ချွတ်ပေးရင်း မကြာမီ နှစ် ယောက်လုံးကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားသည်။စိုစိုးကမသိမသာအကဲခတ် ကြည့်လိုက်တော့ တင်ဝင်း၏လီးမှာအစွမ်းကုန်တောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။တင်ဝင်း၏လီးမှာကိုမျိုးဝေ၏လီးထက်ယောင်ယောင်လေး ငယ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းကျေနပ်ဘွယ်လူစဉ်မိသောအရွယ်အစား ထြစ်ပါသည်။တင်းမာတောင်မတ်နေတာကတော့ ကိုမျိုးဝေထက်သာ သည်။မတ်တပ်ရပ်နေသောကိုမျိုးဝေ၏လီးမှာရှေ့သို့ငေါထွက်နေရုံသာ မက အပေါ်သို့ပင်ကော့တက်လျက်တဆတ်တတ်ခုန်နေသည်။ စိုးစိုးကသူမ၏နုညံ့သောလက်ကလေးဖြင့်အသာအယာဖမ်းယူဆုပ်ကိုင် ကြည့်လိုက်တော့ ပူနွေးသောကိုမျိုးဝေ၏လီးချောင်းကြီးမှာလက်ထဲတွင် တုန်နေသည်မှာအားရစရာကြီးဖြစ်သည်။လီးတန်ကြီးပေါ်မှဖောင်းကြွ နေသောသွေးကြောများကသွေးတိုးနေတာကို လက်မှတဆင့်ခံစားမိ ရင်းစိုးစိုးတကိုယ်လုံးကာမသွေးများဆူပွက်စီးဆင်းလာသည်။ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောရရင်တော့စိုးစိုးတစ်ယောက်အလိုးခံချင်စိတ်များ တဖွားဖွားပေါ်လာတာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ယခုတခါကမတွေ့ဘူး မကြုံ ရဘူးသေးသောသူနှင့်ကာမဆက်ဆံရမည်ဖြစ်သဖြင့် အသစ်အဆန်း ကိုခံစားထိတွေ့လိုစိတ်များကလည်း။
ရမ္မက်ဆန္ဒကိုပိုမိုနှိုးဆွထကြွစေ လေသည်။ထို့အပြင် တင်ဝင်း၏ပြောစကားကြောင့်တင်ဝင်းမှာမိန်းမ မလိုးဘူးသေးသောလူပျိုစစ်စစ်ကလေးဖြစ်သည်ဆိုသောကြောင့်လည်း စိုးစိုး၏ရမ္မက်ဆန္ဒများပေါက်ကွဲမတတ်တဟုန်းဟုန်းတောက်လောင် ကာစောက်ရည်များအလွန်အမင်းယိုစီးကျလာသည်မှာပေါင်များဆီအထိ ဖြစ်နေလေပြီ။ချက်ခြင်းပင် စောက်ပတ်ကိုဖြဲပေး၍ တင်ဝင်း၏အလိုးကို အားရပါးရခံလိုလှပေပြီ။ သို့သော်ကိုမျိုးဝေပြောလိုက်သော ” ချစ်ကောင်လေးကသူပြောတဲံအတိုင်း ဆိုရင် လူပျိုအစစ်ကလေးဆိုတော့ချစ်စောက်ပတ်နဲ့တွေ့တာနဲ့တခါထဲ တန်းထွက်သွားလိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ်သူ့လီးကိုချစ်စောက်ခေါင်းထဲ ထည့်လိုက်တာနဲ့ လီးရည်တွေတခါထဲပန်း လိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ချစ် ကဆန့်တငင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ ဒါကြောင့်သူ့ကိုတခါလောက်အရင်ပေးပြီး လိုက် ဒါမှမဟုတ်ပြီးအောင်စုပ်ပေးလိုက်ပေါ့။ ချစ်သဘောနော် ကိုဘာမှမပြောဘူး “ဆိုသောစကားကြောင့်တင်ဝင်းကိုဂွင်းထုပေးရန်စိတ်ကူး လိုက်သည်။ လီးကိုတော့ အခုတော့စုပ်မပေးသေးဘူး။နောက်တစ်ခါ ကျမှစုပ်ပေးတော့မည်ဟုလည်းတွေးလိုက်သည်။ဤသို့ဖြင့် အစပိုင်းတွင်တင်ဝင်းကိုဂွင်းထုပြီးအရင်ပြီးခိုင်းပြီး နောက်တချီကျမှအလိုးခံရန် လီးကိုအထက်အောက်ဂွင်းထုပေးလိုက်သည်။ထိုအခါကျမှတင်ဝင်း၏လီးသည်ဒစ်ပင်မပြုတ်သေးဘဲလီးအရည်ပြားလေးက ပွင့်သည်ဆိုရုံမျလန်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။ကိုမျိုးဝေ၏ဒစ်ပြဲကြီးဖြင့် သာအလိုးခံဘူးသောစိုးစိုးမှာအသစ်အဆန်းဖြစ်ခါရင်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်လျက်အသဲလည်းယား စောက်ပတ်လည်းယားကာလီးထိပ်အရည်ပြား လေးကိုအသာဆွဲဖြဲလိုက်လေသည်။
“အား မ ” “ဟင် မောင်နာလို့လား” စိုးစိုကဂရုဏာသံလေးဖြင့်မေးလိုက်ရင်း အသဲ တယားယားဖြင့်လီးလေးကိုငုံစုပ်ပေးလိုက်လေတော့သည်။”မောင်နာလို့လား” စိုးစိုးကဂရုဏာသံလေးဖြင့်မေးရင်းအသဲတယားယားဖြင့်လီးလေးကိုငုံစုပ်ပေးလိုက်လေသည်။ “အ….အား” တင်ဝင်းမှာသူ၏လီးကိုစိုးစိုးကငုံစုပ်ပေးလိုက်သောကြောင့်တကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားသည်။သူ့တသက်တွင်ဂွင်းထုဘူးသော်လည်းစိုးစိုးလို မိန်းမလှတစ်ယောက်ကလီးစုပ်ပေးလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးပေ။ ပြီးတော့အခုလီးစုပ်ပေးနေသူမှာလည်းလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကျော်ကုမ္ပဏီ သို့အလုပ်ဝင်စကတည်းက။မှန်း၍ဂွင်းထုခဲ့ရသောအစ်မအကိတ်လေး ဖြစ်နေပြန်သဖြင့်လီးရည်များပင်ပန်းထွက်ချင်သလိုလိုဖြစ်လာသဖြင့် မနည်းချုပ်တည်းထားရလေသည်။ စိုးစိုးကသူမပါးစပ်ဖြင့်ငုံထားသောလူပျိုနုနုထွဋ်ထွဋ်ကလေး၏လီးထိပ်ကို စိတ်ပါလက်ပါစေတနာအပြည့်အဝဖြင်းလျှာလေးဖြင့်ထိုးစွပေးနေလေ သည်။တဖန်ပါးစပ်ထဲတွင်တံတွေးများဖြင့်စိုရွှဲနေသောလီးကိုပြန်ထုတ်၍ လီးထိပ်အရေပြားကလေးကိုအသာဆွဲဖြဲလိုက်ပြန်သည်။လီးအရေခွံ လေးမှာတံတွေးများဖြင့်နူးနေသဖြင့်အနည်ငယ်ပြဲဟသွားလေသည်။ ဤသို့ဖြင့် စိုးစိုးသည်လီးလေးကိုငုံစုပ်လိုက် လျှာလေးဖြင့်ယက်ပေးလိုက်။ လီးရေခွံလေးကိုဆွဲဖြဲလိုက် လုပ်ပေးနေသဖြင့် လီးထိပ်ကလေး မှတဖြေးဖြေးပွင့်အာလာပြီးလီးဒစ်ကလေးပင်ပေါ်လုလုဖြစ်လာနေလေ ပြီ။ ထို့အတူတင်ဝင်းမှာလည်းမကြုံစဘူးထူးကဲစွာ လီးအစုပ်ခံနေရသ ဖြင့် အရသာကောင်းမွန်လှသဖြင့် လိင်တံချောင်းတလျှောက်တစစ်စစ် ဖြစ်ကာလီးရည်များပန်းထုတ်လုဆဲဆဲဖြစ်လာတော့သည်။
” အာ့ အင့် မ မရတော့ဘူး မောင်ပြီးချင်လာပြီ မောင့်လီးကိုမမ ပါးစပ် ထဲကထုတ်ပေးပါ။ား… အီး ထုတ်လိုက်လေ မရဲ့ … အီး သွားပြီ မရတော့ဘူး ထွက်ကုန်ပြီ အား….အူး…. အိ” စိုစိုးသည်တင်ဝင်းပြောစကားကိုနားမထောင်ဘဲတင်ဝင်း၏တင်ပါးများ ကိုလက်ဖြင့်ဆွဲကာ ဖိကပ်ထားပြီးပါးစပ်အတွင်းမှတင်ဝင်းလီးကိုစုပ် အားသန်သန်ဖြင့်စုပ်ပေးလိုက်ရာတင်ဝင်း၏လီးရည်များသူမပါးစပ်ပတွင်းသို့အရှိန်ပြင်းစွာဒလဟောဝင်လာတော့သည်။စိုးစိုးလည်းပါးစပ်အတွင်းမှပြည့်လျှံလျက်မေးစေ့မှပင်စီးကျလာသောလီးရည်များကိုတဂွတ် ဂွတ်မျိုချရင်းပြီးဆုံးသွားသဖြင့်ကာမအရသာကိုခံစားနေသော။ တင်ဝင်း မျက်နှာကိုမျက်လွှာပင့်မော့ကြည့်ရင်း ပီတိဖြစ်နေလေတော့သည်။ ထို့နောက် ထိုင်ရာမှထကာ မေးစေ့တွင်စီးကျနေသောတင်ဝင်း၏ လီးရည်များကိုလက်ခုံဖြင့်သုတ်ရင်းထရပ်လိုက်သည်။ ” မောင် ကောင်းလား မလုပ်ပေးတာကောင်းရဲ့လား အဲဒါမောင့်ကို ချစ်လွန်းလို့လုပ်ပေးတာ သိရဲ့လား ” ဟုချစ်မျက်စောင်းလေးခဲလျက် ကြာမူပါပါမေးလိုက်လေသည်။ “အား ချစ်လိုက်တာ မ ရယ်။မောင့်ဒါမျိုးတစ်ခါမှမခံစားဘူးဘူး မ ကိုတအားပိုချစ်မိသွားပြီ။”ဟုပြန်ပြောရင်းကိုယ်လုံးတီးဖြင့်ကော့ ကော့ကလေးရပ်နေသောစိုးစိုးကို။
ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပြီးမျက်နှာအနှံ့ တရှုံ့ရှုံ့နမ်းရှုပ်နေလေသည်။တင်ဝင်း၏ရင်ခွင်အတွင်းခါးလေးကော့ လျက်ဆီးခုံခြင်းထိကပ်ခါပြန်လည်ဖက်ထားသောစိုးစိုးမှာ တစ်စုံတစ် ခုကိုစဉ်းစားမိသဖြင့် ရင်ထဲတွင်ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားလေသည်။အကြောင်း မှာကိုမျိုးဝေနှင့်နေစဉ်ကကိုမျိုးဝေလီးကိုကြိမ်ဖန်များစွာစုပ်ပေးဘူးသော် လည်းကိုမျိုးဝေ၏လီးရည်များကိုတစ်ခါမှသူမပါးစပ်အတွင်းအပန်းမခံခဲ့ သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။ အကယ်၍ပန်းထဲ့ခဲ့မိလျင်လည်းကိုမျိုးဝေ၏ လီးရည်များကိုမျိုချခြင်းမပြုဘဲအပြင်သို့သာထွေးထုတ်မြဲဖြစ်လေသည်။ အခုတော့ တင်ဝင်း၏လီးရည်များကိုသူမကမျိုချပစ်သည်ကိုလျှို့ဝှက် ကင်မရာမှတဆင့်မြင်သွားလေပြီ။ ဟယ် တတ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုမျိုးဝေနှင့်တွေ့ မှချော့မော့ပြောဆိုကာကိုမျိုးဝေလီးကိုစုပ်ပေးပြီလီးရည်များကိုမျိုချပေး လိုက်မည်ဟုစဉ်းစားစိတ်ဖြေလိုက်လေသည်။့ယခုလောလောဆယ်တော့တင်ဝင်းနှင့်ကာမဂုဏ်ခံစားကာပျော်ပျော်ပါနေလိုက်တော့မည်ဟုစဉ်းစားကာ ” မောင် လာကုတင်ပေါ်မှာခဏ နားလိုက်ပါအုံး အမောပြေတော့မှ မ ကိုလိုးပေးဦး လာ လာ” ဟုဆိုပြီးကုတင်ပေါ်သိုဖင်တုံးလုံဖြင့်ကုန်း၍အရင်တက်သွားလေသည်။တင်ဝင်းမှာလည်းကိုမျိုးဝေနှင့်သုံးနှစ်သုံးမိုးအလိုးခံလာသည့်တိုင်ပျော့အိ တွဲကျခြင်းမရှိဘဲတင်းရင်းဖုထစ်နေသောစိုးစိုး၏ဖင်ကြီးများကိုကြည့် ကာလီးပင်ပြန်တောင်ချင်သလိုလိုဖြစ်လာလေသည်။ နှစ်ယောက်စလုံးကုတင်ပေါ်ရောက်သောအခါစိုးစိုးက “မောင် ရော့ အမောပြေ မရဲ့နို့လေးတွေစို့လိုက်စမ်းပါအုံး” ဟုဆိုကာတင်းရင်းကော့ထောင်နေဆဲဖြစ်သည့်သူမ၏နို့ကြီးကိုလက်ဖြင့် ပင့်၍တင်ဝင်း၏ပါးစပ်တွင်တေ့ပေးလိုက်လေသည်။တင်ဝင်းက သူမ၏နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုအားသန်သန်ဖြင့်တလှည့်စီတပြွတ်ပြွတ်စို့ပေးနေ စဉ်စိုးစိုးကလည်းတင်ဝင်း၏မပျော့မမာဖြစ်နေသောလီးချောင်းကြီးကို လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်နှိုးဆွပေးနေလေသည်။
လူပျိုလေးဖြစ်သောတင်ဝင်း မှာလည်းပထမတချီပြီးစီးထားသော်လည်းလီးမှာမကြာခင်ပြန်လည် ထောင်မတ်လာလေသည်။တင်ဝင်း၏လီးကြီးစိတ်တိုင်းကျထောင်မတ် လာသည့်အခါ စိုးစိုးက “မောင် မတို့လိုးကြရအောင် အခုတော့ မ ကမောင့်ကိုလိုးပေးမှာ မောင့်ပက်လက်လှန်လိုက်” ထို့နောက်စိုးစိုးသည်တင်ဝင်းအပေါ်တက်ခွကာမာတောင်နေသောလီး ကြီးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်၍။သူမ၏စောက်ခေါင်းဝတွင်တေ့ကာဖြေးဖြေးချင်း ထိုင်ချလိုက်လေသည်။ “အားမောင့်လီးကြီးကမာနေလိုက်တာအရမ်းဘဲ အု အစ် ဟင့် ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် အု” ” မောင်လည်းတအားကောင်းတာပါဘဲ မရယ် အခုတော့ မောင်စိတ်ကူး ယဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီ မရဲ့” ” ဟင့် မောင်ကဘယ်လိုများစိတ်ကူးယဉ်ထားခဲ့တာလေ အာ့ အိ” စိုးစိုသည်တင်ဝင်း၏ရင်ဘတ်ပေါ်လက်ထောက်လျက်ဖင်ကလေး ကြွခါကြွခါတစွပ်စွပ်ဖြင့် မှန်မှန်လေးလိုးပေးနေရင်းကအမူပါပါလေး မေးလိုက်သည်။ “အော် ဒီလိုပါ မမကိုမောင်စတွေ့တဲ့ နေ့ကစပြီးမောင့်ဂွင်းထုတိုင်း မမကိုမှန်းခဲ့တာ ဒီလိုပုံစံလည်းပါတယ် မရဲ့ ” ဟင့် လူဆိုလေး သူများကို ကဲပါမောင်ရယ် မောင်ကလည်းအောက် ကပြန်ကော့လိုးပေးလေ မတစ်ယောက်ထဲလိုးပေးနေရတာမောတယ် မောင်ရဲ့” ထိုအခါတင်ဝင်းကလည်းငယ်ရွယ်သူပီပီခါးအားသနိသန်ဖြင့်ကော့ ပြီးတဇတ်ဇတ်လိုးပေးလိုက်လေသည်။
ထိုအခါကျမှစိုးစိုးလည်းဒူး ထောက်လျက်တင်ဝင်းရင်ဘတ်ကိုလက်ဖြင့်ထောက်ထားရင်း။ ပေါင် လေးကိုကွထားရင်းတင်ဝင်း၏ကော့၍ကော့၍လိုးဆောင့်ချက်များကို မျက်စိလေးမှေးကာအရသာခံနေလေသည်။အားထိတယ်မောင် လိုး…လိုး အင့် အု အီး မောင် မနို့တွေကိုဆွဲပေးလေ အား မ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုပွတ် ပေး ချေပေးလေ အာ့ ဟုတ်တယ် မောင်ကောင်းလိုက်တာ မိန်းမဆို တာအလိုးခံရင်း နို့သီးလေးတွေချေပေးရင်အရမ်းအရသာရှိတာဘဲ။ သိလား လိုးမောင်ရေ မစောက်ပတ်ကြီးကိုအားမနာတမ်းစိတ်ရှိလက် ရှိသာလိုးပေးပါ မောင်ရယ် အင့် အဟစ် ဟစ် အု” စိုးစိုးကလည်းမောင်မောင်အကော့နှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဆောင့်ဆောင့်ချရင်း နှစ်ဦးစလုံးထူးကဲသောကာမအရသာကိုအပြည့်အဝခံစားနေကြလေ သည်။စိုးစိုးမှာမိန်းမများတအားတဏှာစိတ်ထကြွလာလျင်ဖြစ်တတ် သောသဘာဝအတိုင်းသားအိမ်ခေါင်းမှအောက်သို့ငိုက်ဆင်းလာပြီ ဖြစ်သဖြင့်သူမဆောင့်ချလိုက်တိုင်းမောင်မောင့်လီးထိပ်ဖြင့်ဆောင့်မိ သဖြင့် ထူးခြားလှသောကာမအရသာကိုအောင့်တောင့်တောင့်ဖြင့် မျက်လုံးများပြာဝေခမန်းခံစားရရှိနေလေသည်။ အား ကောင်းလိုက်တာကွာ မောင့်လီးကြီးက မရဲ့သားအိမ်ခေါင်းကို ဆောင့်မိနေပြီ သိရဲ့လား အား လိုးကွာလိုး လိုး အင့် အား အီး” စိုးစိုးမှာစောက်ခေါင်းအတွင်လှိုင်းတွန့်နံရံများတဖြတ်ဖြတ်လှုပ်ရှားကာ။
တင်ဝင်းလီးကြီးကိုဆွဲညှစ်စုပ်ယူပေးရင်းစောက်ရည်များတဗြစ်ဗြစ် ထွက်ခါ ပြီးဆုံးခြင်းအထွဋ်အထိပ်သို့ တကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ခါ ကာရောက်ရှိသွားလေသည်။ သူမစိတ်ထဲတွင်ကိုမျိုးဝေလိုးပေးစဉ်ကထက် ပိုမိုပြည့်ဝသောကာမစည်းစိမ်ကိုခံစားရရှိမိသည်ဟုကိုမျိုးဝေနှင့်တွေ့သော အခါပြောပြရှာလေသည်။ တင်ဝင်းမှာလည်းစိုးစိုးစောက်ခေါင်းအတွင်းသားနံရံများ၏သန်မာ သောဆွဲစုပ်ယူပေးမှုကြောင့် လီးတလျှောက်လုံးကျင်တက်လာပြီး သူ၏ပူနွေးပြစ်ချွဲသောသုတ်ရည်များကိုစိုးစိုး၏စောက်ခေါင်းအတွင်း သို့တဖျင်းဖျင်းပန်းထည့်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက်ခေတ္တမျအနားယူကြပြီးနောက် နောက်တချီလိုးပွဲကြီး ထပ်မံဆင်နွှဲကြပြန်လေသည်။ ဒီတစ်ခါတော့မျက်နှာကျက်တွင်လျှို့ဝှက်တပ်ဆင်ထားသော ကင်မရာမှတဆင့် တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုနေသောကိုမျိုးဝေတစ်ယောက်သူမတို့လိုးကြတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ စိုးစိုးကကုတင်ပေါ်တွင် လေးဘက်ထောက်ဖင်ကုန်း၍အလိုးခံလေသည်။ ထိုသို့စိုးစိုးစောက်ပတ်အတွင်းသို့တင်ဝင်းလီးကြီးဖြင့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လိုးပေးနေသည်ကို။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်မြင်ရသောကိုမျိုးဝေ မှာလည်းဂွင်းထုရင်း အကြီးအကျယ်တချီပြီးစီးသွားလေသည်။
ဤသို့ဖြင့်စိုးစိုးမှာယောက်ကျားနှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်နက်ကာမအရသာ ပေးစွမ်းနိုင်စွမ်းရှိသောမိန်းမတယောက်ဖြစ်လာလေသည်။ ထိုနေ့ညနေက တင်ဝင်းနှင့်လူချင်းခွဲတော့ စိုးစိုးတစ်ယောက်ကတုန် ကရင်ဖြစ်ခါ ဒူးများပင်ယိုင်နေသောဟူ၏ စိူးစိုးမှာတင်ဝင်းနှင့်တွေ့ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပင် သူတို့၏လိုးပွဲကို တိုက်ရိုက် ကြည့်ပြီး စမာန်တက်နေသောကိုမျိုးဝေ၏ပူဆာမှုကြောင့်ကိုမျိုးဝေ နှင့်ပွဲဆက်ရပြန်လေသည်။ အစကတော့ အတွေ့အကြုံအသစ် လူအသစ် ဟိုဟာအသစ်မို့တင်ဝင်းနှင့်စိတ်ပါလက်ပါရေကုန်ရေခမ်းလိုးပွဲ နှစ်ပွဲဆက်တိုက်ဆင်နွှဲခဲ့ရသဖြင့် ကိုမျိုးဝေနှင့်ရက်မခြားဘဲတွေ့ဘို့စိုးစိုး သိပ်စိတိမပါခဲ့ပေ။သို့သော် ဝက်သားစားတာငြီးငွေ့လှသဖြင့်ချဉ်ပေါင် ကျော်ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ဖြင့် ထမင်းမြိန်လိုက်သော်လည်းနောက်တစ်ခါဗိုက် ပြန်ဆာတော့ ဝက်သားဟင်းကစားလို့ပြန်ကောင်းနေသလိုဖြစ်ရပြန် သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုနေ့ကကိုမျိုးဝေနှင့်ချိန်း၍လိုးပွဲကြီးကျင်းပတော့လည်းစိုးစိုး မှာပင်ပန်းခဲ့သမျှပြေပျောက်ခါ။
အဟောင်းမအသစ်ဖြစ်လျက် ပြန်လည် တက်ကြွလန်းဆန်းနုပျိုလာရပြန်လေသည်။ထို့အပြင် ထိုနေ့ကစိုစိုး ကိုတင်ဝင်း၏အလိုးခံချိန်စိုစိုး၏ခံစားမှုရသများကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မေးရင်းလိုးပေးသလိုစိုစိုးကလည်းသူမစိတ်အတွင်းမှထကြွခဲ့သော တဏှာစိတ်ရိုင်းများကိုခရေစေ့တွင်းကျတစ်တစ်ခွခွပြန်ပြောပြရင်းပက် ပက်စက်စက်အလိုးခံလေသည်။ ချစ် မနေ့ကသူ့လီးကြီးကိုချစ်စုပ်ပေးတာ ကို့လီးကိုစုပ်ပေးတုန်းကထက်ပိုပြီးစိတိပါလက်ပါရှိသလိုဘဲ နော် ကိုမျိုးဝေကစောက်ရည်များဖြိုင်ဖြိုင်ယိုစီးကျနေသော စိုးစိုး၏စောက်ဖုတ် လေးအတွင်း သူ၏အစွမ်းကုန်တောင်မတ်နေသောလီးကြီးဖြင့်လိုးသွင်း ရင်းမေးလိုက်လေသည်။ “အင်းပေါ့ ကိုကလဲ အဟင့် သူနဲ့ကဒီတစ်ခါမှပထမဆုံးကြုံရတော့ ဆိုတော့လေ ပိုပြီးဖီးလာသလိုဘဲ ဟင့် ဟင့် ပြီးတော့လေ သု့လီးက ကို့လီးလိုမဟုတ်ဘူး သူ့လီးဒစ်ကမပြဲသေးဘူးသိလား သူ့လီးကလေ ဖြဲပေးတာတောင်နည်းနည်းဘဲပွင့်လာတာ အဲဒါကြောင့်ချစ်ကလဲ အသဲယားလာတာနဲ့တအားငုံစုပ်ပေးလိုက်မိတာပါ” ကိုမျိုးဝေမှာစိုးစိုး၏စကားကိုနားထောင်ရင်းသူ၏လီးကြီးမှာပိုမိုမာကြော တောင်ထလာကာ။လိုးအားဆောင့်အားမှာလည်းပိုမိုပြင်းထန်လာလေ သည်။ဤသည်ကိုအောက်မှအလိုးခံနေရသောစိုးစိုးကလည်းသိသည်။
အရင်တုန်းက ကိုတိုး၏အလိုးကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ဘူး သော်လည်းယခုကဲ့သို့ အားပါသောဆောင့်လိုးချက်မျိုကိုမခံစားရခဲ့ဘူး ပေ။ ထိုကြောင့်သူမမှာလည်းပိုမိုထိမိအရသာရှိနေလေသည်။ထို့အပြင် ယောက်ကျားတစ်ယောက်နှင့်အရှက်ကုန်ပက်ပက်စက်စက်အလိုးခံ ခဲ့သည်များကိုအခြားယောက်ကျားတစ်ယောက်အားပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ပြန် ပြောနေရသည်ကသူမ၏ကာမစိတ်များကိုလှုပ်ရှားနိုးကြွစေလေသည်။ ထို့အပြင်ထိုသို့ပြောပြနေရင်းနားထောင်သူယောက်ကျားကသူမ စောက်ပတ်ကိုဏှာစိတ်ပြင်းပြင်းဖြင့်လိုးညှောင့်ပေးနေလေရာစိုးစိုး မှာတမူထူးခြားသောကာမအရသာတမျိုးကိုခံစားရရှိပြန်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ” အင်း အား အီး ပြီးတော့လဲလေ သူလီးကပါကင်လီးလေး ကိုရဲ့ သိလား သူကဘယ်စောက်ပတ်မှမလိုးဘူးသေးတာသေချာတယ်ကိုရဲ့ သူကလေ ဂွင်းတောင်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ထုဘူးပုံမကျဘူး ကိုရဲ့ သိလား ဒါကြောင့်စိုးက ဒီလိုလူပျိုစင်လီးလေးကိုပါကင်ဖွင့်ရတော့မယ် ဆိုပြီးစိတ်ပါလက်ပါ စုပ်ပေးမိတာပါ။
သူ့လီးကိုစုပ်ပေး လိုက် တံတွေးနဲ့နူးအိလာတဲသူ့လခွေံလေးကိုအောက်ဆွဲချလိုက်နဲ့။ ဒစ်ပေါ်အောင် မနည်းဖွင့်ယူရတာ ကိုရဲ့သိလား စိုးလည်းလေစိုးကို သူကထိဆောင်မထိဘဲနဲ့ သူ့လီးလေးကိုစုပ်ပေးနေရာနဲ့ကို ဟိုလေ ဟို စိတ်တွေတအားထလာတာ စိုးစောက်ပတ်လေးကအရည်တွေကို တတောက်တောက်ကျရော ဟင့် ဟင့်” အခုချိန်တွင်တော့ ကိုမျိုးဝေမှာသူ့တစ်သက်တာတွင်မကြုံစာဘူးရာဂသွေး များအကြီးအကျယ်ထကြွလျက် တဖုန်းဖုန်းတဖန်းဖန်းဖြင့်စိုးစိုး စောက်ပတ်ကြီးကိုအသကုန်ဆောင့်လိုးပေးနေလေပြီ။စိုးစိုးမှာလည်း မနေ့က လူ့အသစ် လီးအသစ်လအတွေ့အကြုံသစ်ဖြင့်ခံစားရရှိသော အတွေ့အကြုံကတမျိုး ယခုမနေ့ကအတွေ့အကြုံကိုစမြုံ့ပြန်လျက် ပြန်ေပြာရင်း ဏှာစိတိသန်သန်ဖြင့်အလိုးခံနေရသည်ကတမျိုးဖြင့် ထူးခြားဆန်းပြားသောကာမအရသာကိုနှစ်မျိုးနှစ်ဖုံခံစားကျေနပ်နေ လေသည်။ “ပြီးတော့လေ အား သူ့လီးကြီးပေါ်ကိုစိုးစောက်ပတ်ကြီးဖြဲပြီးထိုင်ချလိုက်ရတာလည်းသိပ်အရသာရှိတာဘဲ သိလားကို ဟင့်ဟင့် အားရှီး လီးအသစ်ဆိုတော့စိုးကလည်းတအားစိတ်ထနေတာလေ။
ပြီးတော့ဒီလီးကဘယ်စောက်ပတ်မှမလိုးဘူးသေးတဲ့လီး အခုမှငါ့ စောက်ခေါင်းထဲကိုပထမဆုံးဝင်တဲ့လီးဆိုပြီးတော့အရမ်းဖီးတက်တာ ဘဲကိုရာ အာ့ အင့် ဆောင့်ပေးကို အားကနေ့ကိုဆောင့်ပေးတာစိုး ဖြင့် သိပ်အားရတာဘဲနော် ဆောင့်ကို ဆောင့် အားအခုတော့လည်း ကိုလိုးပေးတာကခံလို့ကောင်းနေပြန်ရော့ အင့် ရော့ပါကိုရယ် ရော့ပါ စိုးစောက်ပတ်ကြီးကွဲချင်ကွဲပါစေတော့ ဆောင့်လိုးစမ်းပါကိုရယ် အု အား အီး” ဤသို့ဖြင့်စိုးစိုးမှာပြောရင်းပြောင်ရင်းကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ဖင်ကြီ့းဖြင့်ပင့်ခါပင့်ခါအားရှိပါးရှိအလိုးခံရင်းသူမစောက်ခေါင်းအတွင်း သားများက ကိုမျိုးဝေလီးချောင်းကြီးကိုဖြစ်ညှစ်စုပ်ယူရင်းစောက်ရည်များ ပန်းထွက်ခါပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ရှိသွားလေတော့သည်။ကိုမျိုးဝေမှာလည်းစိုးစိုးကဖီးအပြည့်ဖြင့်ပြောပြသည်ကိုနားထောင်ရင်း အားရပါးရဆောင့်လိုးနေရင်းမကြုံစဘူးသောကာမအရသာကိုတစိမ့်စိမ့် ခံစားရင်းသူ့လီးချောင်းထဲမှသုတ်ရည် ပူပူနွေးဗနွးဖြူပြစ်ပြစ်များကိုစိုးစိုး ၏စောက်ခေါင်းထဲသို့ပြည့်လျှံအောင်ပန်းထည့်ပေးလိုက်လေတော့ သတည်း…. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အကိတျမမ